အိမ်လွမ်းသူ: 10/01/2008 - 11/01/2008
အိမ်လွမ်းသူတယောက် ဖလူ မိနေပါတယ်။ စာဖတ်သူတို့ ဖလူ ကာကွယ်ဆေးလေးများ မထိုးထား ရသေးလျှင် ဆေးကြိုတင်ထိုးကြဖို့ သတိပေးချင်ပါတယ်။ ဂျီတော့တွင် ကုလားမ(India ကလာသော ဗိုင်းရပ်) လိုက်နှာက် ယှက်နေသလို အိမ်လွမ်းသူကိုလည်း ဖလူနှောက်ယှက်နေပါတယ်… အားလုံးကို စေတနာရှေ့ထား၍ သတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်…။
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 6:10 PM5comments
အလုပ်ထဲမှာက ရှားရှားပါးပါး အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ထဲရှိပါတယ်.. တယောက်က ပြောင်းရအုံးမယ်တဲ့။ ကျမတို့အလုပ်မှာက နှစ်ဆိုင်းခွဲထားတာ။ မနက်ပိုင်းက အမျိုးသမီးတွေ များပြီး ညဆိုင်းမှာကတော့ အမျိုးသားတွေများတယ်။ ကျမက ညဆိုင်းမှာလုပ်ရတာ။ ကျမတို့ ဌာနမှာက စက် ၁၄ လုံးရှိပြီး အလုပ်သမားက ၁၅ ယောက်ရှိတယ်။ တယောက်က Leader ပါ။ သူကတော့ စက်လည်တဲ့ လူတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ (ဝါယာ) ယူပေးတာတို့ ဘယ်သူက ဘယ်စက်လည် ဆိုပြီး ကြီးကြပ်တဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာ။ ကျမရဲ့ တဦးတည်းသော အမျိုးသမီး ဖော်က ရုရှားမလေးပါ။ လူးဒါ လို့ခေါ်တယ်။ သူ့အသက်က ၄၅ နှစ်ရှိပြီ။ ကလေးသုံးယောက် ရဲ့မိခင်၊ မြေးငါးယောက်ရဲ့ အဖွား။ သားတယောက်၊ သမီးတယောက်က အိမ်ထောင်ကျပြီး ကလေးတွေရနေတာ။ သူနဲ့အတူနေတာက ၁၃ နှစ်အရွယ် သမီးလေး။ အခုသူ နေ့ဆိုင်းကို ပြောင်းဖို့ဖြစ်လာရတာကလည်း အဲ့ဒီသမီးကြောင့်ပါပဲ။
သူတို့မိသားစု အမေရိကားကိုရောက်တာ ရှစ်နှစ်လောက်ကြာပြီလို့ပြောတယ်။ သူတို့ စရောက်တုန်းက မိသားစုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲတဲ့။ နောက်ပိုင်း လင်မယားပြဿနာတက်ပြီး တကွဲတပြားဖြစ်ကုန်တာ။ အခုဆို သမီးတယောက်က သူ့တိုင်းပြည်ပြန်ပြီး အိမ်ထောင်နဲ့ အဲ့ဒီမှာပဲနေတော့တယ်။ သားတယောက်ကလည်း သူ့အိမ်ထောင်နဲ့သူ မြောက် ကယ်ရိုလိုင်းနားမှာတဲ့။ လူ့ဒါရဲ့အမျိုးသားကတော့ သူတို့ကွဲပြီးကတည်းက ဒီပြည်နယ်ကို လာလို့မရတော့ဘူးတဲ့။ အဲ့ဒါနဲ့ လူ့ဒါလည်း အရွယ်ရောက်စ သမီးလေးနဲ့ နှစ်ယောက်တည်း နေရတော့တာပေါ့။ သူကလည်းခေသူတော့မဟုတ်ပါ။ ၄၅ နှစ်ဆိုပေမဲ့ ချစ်ချင်သူတွေ ဝိုင်းဝိုင်းလည်အောင် ရုပ်ရည်ရှိသူပါ။ သူ့အပြောအရ လက်ရှိချစ်သူက နှစ်ယောက်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်သိတဲ့ သူ့ကိုပိုးနေတဲ့သူမပါသေးဘူး။ ဒီလို ပိုးပန်းနေသူတွေကလည်း ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိမှန်းတော့ ကျမလည်းမသိဘူး။
သူ့မှာက ချစ်သူတွေရှိပေမဲ့ လက်ထပ်ဖို့အထိတော့ သူမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ချစ်သူ တွေဆိုပေမဲ့လည်း သူ့ဘဝတခုလုံးအတွက် တာဝန်ယူလက်တွဲချင်တဲ့သူတွေတော့ ဟုတ်ဟန် မတူပါဘူး။ ခဏတဖြုတ်သာယာမှုလေးအတွက်သာဖြစ်ပြီး အရေးကြုံလာလျှင်တော့ သူ့အနား မှာ အားကိုးစရာဆိုလို့ ဘယ်သူမှမရှိတာပဲ။ သူတို့သားအမိနှစ်ယောက် နေထိုင်စားသောက် နိုင်ဖို့အတွက် စနေနေ့တောင်မနားနိုင်ပဲ သူအလုပ်လုပ်ရတယ်။ သူက ညဘက်အလုပ်ဆင်း တော့ သမီးလေးက အုပ်ထိမ်းမဲ့သူမရှိဘူး။ သူ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ သူထင်သလိုနေတယ်။ မအေ မရှိတော့ညဘက် သွားချင်တဲ့နေရာကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သွားတယ်။ သူငယ်ချင်းအိမ် မှာအိပ်တယ်။ မအေက ဖုန်းဆက်ရင်တော့ အိမ်မှာရှိနေတဲ့ ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီး မအေကို ညာထားတယ်။
တနေ့… လူ့ဒါတယောက် ပျာယာခတ်နေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူ့သမီးဆီကို ဖုန်းဆက်တာ အိမ်ဖုန်းရော၊ လက်ကိုင်ဖုန်းရော မကိုင်ဘူး။ ဘာများဖြစ်နေလို့လဲမသိဘူး ဆိုပြီး Leader ဆီခွင့်တောင်းပြီး ပြန်သွားတယ်။ အိမ်ရောက်တော့ သူ့သမီးမရှိဘူး။ လက်ကိုင်ဖုန်းကိုဆက်လိုက်တော့ အလုပ်ထဲကဆက်တာထင်ပြီး အိပ်နေပြီလို့ပြောတယ်။ သူက အခုအိမ်ကနေဖုန်းဆက်နေတာ ဆိုတော့မှ ပြာယိပြာယာနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းအိမ်မှာ ရောက်နေတာဖြစ်ကြောင်း၊ သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့ အမေဖြစ်သူက မနက်မှပြန်ပို့ပေးနိုင်မှာလို့ ဖုန်းဆက်သတဲ့။ အပူမောတွေနဲ့ သူအလုပ်ကိုပြန်ရောက်လာပြီး ပြောပြတယ်။ ပြီးတော့ သမီးနဲ့ ညဘက်အတူရှိနိုင်ဖို့ မန်နေဂျာကို အကျိုးအကြောင်းပြောပြီး နေ့ဆိုင်းပြောင်းဖို့ လျှောက်လွှာတင်ရတယ်။ သူက လုပ်သက်ကလည်း ၅ နှစ်ကျော်နေပြီဆိုတော့ စာနာထောက် ထားမှုတွေနဲ့ အမြန်ပြောင်းဖို့ အမိန့်ကျလာပါတယ်။ တခဏ အပူမီးကတော့ သူ့အတွက်ငြိမ်းသွားပါတယ်။
အဲ့ဒီကိစ္စတွေမဖြစ်ခင်က သူနဲ့ကျမ မကြာခဏစကားပြောဖြစ်ကြပါတယ်။ သူ့အကြောင်းတွေ၊ တခြားအမျိုးသမီးတွေရဲ့အကြောင်းတွေကို ကျမလည်နေတဲ့ စက်နားမှာ လာလာပြီးပြောနေ တာပါ။ ကျမကသိပ်မကြိုက်ပေမဲ့ အားနာပြီး နားထောင်နေရတယ်။ ထမင်းစားချိန်တွေ၊ နားချိန်တွေမှာတော့ သူ့ boy friend တွေကို ဖုန်းနဲ့စကားပြောနေရလို့ ကျမတို့နဲ့ စကား ပြောချိန်မရပါဘူး။ အလုပ်ချိန်မှာ သူလာပြောတဲ့စကားတွေကလည်း အရေမရ အဖတ်မရတဲ့ စကားတွေကများပါတယ်။ ကျမက သူနဲ့ စကားပြောရတာထက် ဗီယက်နမ်အဖိုးကြီးတွေနဲ့ စကားပြောရတာကို ပိုကြိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို မေးလို့ရတယ်။ သူနဲ့ကြတော့ သူပြောချင်တဲ့ သူ့အတွင်းရေးကိစ္စတွေကိုပဲ လာလာပြောနေလို့ ကိုယ်သိချင် တဲ့ သူ့နိုင်ငံအကြောင်းတောင် မေးလို့မရပါဘူး။ သူ့နိုင်ငံအကြောင်းမေးရင် မပြောချင်သလို စကားလွှဲသွားရော။
သူပြောတဲ့ သူ့အကြောင်းတွေထဲမှာ ကိုယ်ဌာနမှာ အတူတူအလုပ် လုပ်နေတဲ့ ဗီယက်နမ် အဖိုးကြီးအကြောင်းလဲပါတယ်။ အဲ့ဒီအဖိုးကြီးနာမည်က လောင်း လို့ခေါ်တယ်။ လောင်းက အသက် ၆၅နှစ်ကျော်နေပေမဲ့ လုပ်သက် ၁၀ နှစ်မပြည့်သေးလို့ ပင်စင်မရသေးဘူး။ လောင်းက ကျမနဲ့လည်းခင်တယ်။ လောင်းက လူ့ဒါဟာ သူ့ girl friend ပါလို့ လူ့ဒါဓါတ်ပုံ ထုတ်ပြပြီး ပြောပြဖူးတယ်။ သူတို့နှစ် ယောက်ကလည်း အမြဲတတွဲတွဲပဲ။ လောင်းက လူ့ဒါ စားချင်တာဆိုအမြဲဝယ်ခဲ့ပေးတယ်။ လူ့ဒါကလည်း လောင်းပေးတဲ့ဟာဆို အကုန်ယူတယ်။ လောင်းဆီကလည်း ပိုက်ဆံချေးတယ်။ ဘယ်တော့မှ ပြန်မဆပ်ဖူးလို့လဲ လောင်းကပြော ဖူးတယ်။ တနေ့ သူတို့နှစ်ယောက်ပြဿနာတက်ပြီး လူ့ဒါက လောင်းနဲ့ညစာအတူမစား တော့ဘူး။ လူ့ဒါတယောက် မက္ကဆီကန် တယောက်နဲ့ ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုပြီး လောင်းက လူ့ဒါ ကို မကြေနပ်ရာကနေ စဖြစ်ကြတာ။ သူ့ကားနဲ့ လူ့ဒါကို ကြို၊ ပို့နေကြဖြစ်တဲ့ လောင်းဟာ အဲ့ဒီနေ့က လူ့ဒါကို သူ့ကားနဲ့ မတင်တော့ဘူး။ လူ့ဒါတယောက် သူ့အိမ်ကို လမ်းလျှောက်ပြန်ရတယ်။ နောက်တနေ့ လူ့ဒါက သူ့ကားနဲ့သူ အလုပ်လာရတယ်။ အကျိုးအကြောင်းလာပြောပြလို့ ကျမသိရတာ။ လောင်းကို ဘာဖြစ်လို့ အဲ့ဒီလိုလုပ်တာလဲလို့ မေးတော့ ခေါင်းခါပြီး ပြုံးနေတယ်။ သူ့ကိုယ်သူအောင်နိုင်သူကြီးလိုမျိုး။
နောက်တပတ်လောက်ကြာတော့ လူ့ဒါတယောက် ကြောက်လန့်တကြားနဲ့ ကျမကို စကား လာပြောတယ်။ မနက်လေးနာရီလောက်မှာ လောင်းတယောက် သူ့အိမ်ခန်းထဲကို သောတုနဲ့ ဖွင့်ပြီးဝင်လာတယ်။ သူ့အခန်းတံခါးဖွင့်သံကြားရလို့ သူ့အိပ်ခန်းထဲကနေထွက်ကြည့်တော့ ဧည့်ခန်းထဲမှာ လောင်းရောက်နေပြီတဲ့။ သူထွက်လာတော့ လောင်းက ဒူးထောက်ပြီး မျက်ရည်တွေကျလျှက်ကနေ သူ့ကိုတောင်းပန်နေသတဲ့။ ပြီးတော့ အရမ်းလွမ်းပြီး မခွဲချင်ပါ ဘူးလို့လဲပြောသတဲ့။ သူကတော့ ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ ဘယ်ကနေ ဘယ်လို အိမ်သော့ရသလဲဆိုတော့ လူ့ဒါအိပ်ထဲကနေခဏယူပြီး copy ထားတာတဲ့။ သူ့အိမ်မှာ ယောက်ျားလဲမရှိ၊ သမီးတယောက်ကလည်း အရွယ်ရောက်နေတော့ သူတော်တော်စိတ်ပူ ကြောင်း ကျမကို အကြာကြီးပြောနေတယ်။ သူပြုထားခဲ့တဲ့ အမှုတွေအတွက် ကျမလည်းဘာမှ မကူညီနိုင်ပါဘူး။ ယောက်ျားတယောက်ဆီက ရသလောက်လေးယူပြီး ကိုယ့်ဂုဏ်သိက္ခာပြန် ပေးနေရတာ မတန်လှပါဘူး။ နောက်ပြီး ဒီယောက်ျားဟာ သူ့ရဲ့ boy friend စာရင်းထဲမှာ မပါပါဘူး။ သူ့ girl friend ပါလို့ ပြောနေတာကလည်း တဖက်သတ်ပါတဲ့။ လောင်း မှာကလည်း အတူနေတဲ့ girl friend တယောက်ရှိသေးတယ်တဲ့… ကဲ .. ကြည့်စမ်းပါအုံး။ ဘယ်လောက်ရှုပ်တဲ့ အရှုပ်တွေလဲဆိုတာ..။
ကျမကလည်း ကြံကြံဖန်ဖန်တွေ တွေ့တတ်၊ တွေးတတ်နေသလားတော့မသိဘူး.. ။ တနေ့ က ယူကျူ့ကတီဗွီတွေမှာ လိုက်မွှေနှောက်ရင်း ကမ္ဘောဒီးယားက ကလေးပြည်တန်ဆာတွေ အကြောင်းကြည့်မိပြီး လူ့လောကကြီးထဲမှာနေရတာ တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ် လို့ထင်မြင်လာမိတယ်။ ကိုးနှစ်၊ ဆယ်နှစ် အရွယ်မိန်းကလေးတွေ ဘယ်လိုဆွဲဆောင်မှု မျိုးမှ မရှိဘဲ တကယ့်ကလေးလေးတွေဟာ သူတို့နဲ့ ဘယ်လိုမှမဆိုင်တဲ့ ပြည့်တန်ဆာခန်းတွေ ထဲမှာ တွေ့နေရတယ်ဆိုတာ ငယ်ငယ်က ဖိုးဖွား၊ မိဘတွေပြောတဲ့ ဆုပ်ကပ်တွေများ ရောက်လာပြီ လားလို့စဉ်းစားနေမိတယ်။ ကြားဖူးတာကတော့ ဆုပ်ကပ်ရောက်လာရင် ဘေးဆိုးအမျိုးမျိုးတွေ့ပြီး သေကြေကြ၊ ရောဂါဘယတွေ ထူပြောလာကြပြီး၊ သက်တမ်းတွေက တဖြည်းဖြည်း တိုလာကြမယ်။ နောက်ဆုံး လူ့သက်တမ်းဟာ ၃၀ နှစ်အထိသာရှိတော့မှာဖြစ် ပြီး အသက် ၆ နှစ် ၇နှစ်လောက်လူတွေက ကလေးမွေးကြပြီး အဲ့ဒီကလေးတွေဟာ ဘယ်လောက်သေးသလဲဆိုရင် ဒန့်ကျွဲပင်မှတောင် ပုခက်ဆင်လို့ရနိုင်တယ်တဲ့။
ဟိုးတလောတုန်းကလည်း DVB ရုပ်မြင်သံကြားထဲမှာ ကြည့်လိုက်ရတာက အီသီယိုးပီးယားမှာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် မိန်းကလေးတွေက ကလေးမွေးနေကြပြီး၊ အဲ့ဒီမှာ မိန်းကလေး ၆ နှစ် ၇ နှစ်အရွယ်တွေဟာ လိင်ဆက်ဆံနိုင်တဲ့အရွယ်ဖြစ်နေပြီလို့ ဒေသခံ အမျိုးသားတွေက သတ်မှတ်ထားသတဲ့။ တကယ့်ကို စက်ဆုပ်စရာ လူ့လောကကြီးဖြစ်နေပါပြီ။ တိရစ္ဆာန်တွေ တောင် သူ့အချိန်နဲ့သူ၊ သူ့အရွယ်နဲ့သူ သဘာဝကျကျ ဘဝတွေကိုဖြတ်သန်းကြရ သေးတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ တရားတော်တွေနဲ့အညီ ကျင့်ကြံနေထိုင်ကြတဲ့ မေတ္တာတရားတွေ ထားနိုင်ကြတဲ့ သီလရှိတဲ့ လူတွေကတော့ သက်တမ်းရှည်ရှည်နေကြရပြီး နောက်ပိုင်း လူ့သက်တမ်းတွေ တဖြည်းဖြည်းပြန်ရှည်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ဒီလိုကျန်ခဲ့မဲ့လူတွေ ကလည်း သီလကို ခါးဝတ်ပုဆိုးကဲ့သို့ မြဲမြဲမြံမြံ စောင့်ထိမ်းကျင့်ကြံနိုင်ကြမှ ကျန်တဲ့ သူတွေထဲပါမှာဖြစ် တယ်တဲ့။ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ လောကကြီးမှာ သီလစောင်ထိမ်းနိုင်တဲ့ သူရဲ့ပမာဏကလည်း ရေခြောက်ခန်းတော့မဲ့ အိုင်ထဲကငါးတွေကို ဇကာတခုနဲ့ဆယ်ယူပြီး၊ ဇကာထဲပါလာတဲ့ငါးကို ကြောင်စားအုံးမယ်။ ကြောင်စားလို့ပိုတဲ့ ငါးတွေမှ လွတ်မြောက်ရာ ရေကန်ကြီးထဲရောက်ကြမှာတဲ့။ ကဲ…အဲ့ဒီတော့ တော်တန်ရုံ ဝိရိယနဲ့ သီလလုံအောင်စောင့် ထိမ်းဖို့ခက်တဲ့လောကကြီးထဲမှာ ဇကာထဲပါပြီး ကြောင်စားမခံရတဲ့ ငါးထဲမှာ ကိုယ်ပါအောင် သီလကို လုံအောင်စောင့်ထိမ်းကြဖို့သာ ကြိုးစားဖို့ရှိပါတော့တယ်။
ဒီနေရာမှာကတော့ ငါးပါးသီလဖြစ်တဲ့ သူ့အသက်သတ်ခြင်းအမှု၊ ပိုင်ရှင်မပေးသောပစ္စည်းကို ခိုးယူခြင်းအမှု၊ လိမ်လည်ပြောဆို၍ မိမိအကျိုးအတွက် အများသူငါ ကိုယ်စိတ်မချမ်းသာအောင် ပြုမူခြင်းအမှု၊ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ ဆိုတဲ့ အိမ်ထောင်ရှိသော ယောက်ျားမိန်းမတို့ ဖောက်ပြန်ကြခြင်း၊ မိဘအုပ်ထိမ်းမှုအောက်က မိန်းကလေးတွေကို ပြစ်မှားကျူးလွန်ကြ ခြင်းစသော သူတပါးအိမ်ယာ ကျူးလွန်ခြင်းအမှု၊ လူ့ဘဝ၏ ပျက်စီးရာ၊ ပျက်စီးကြောင်းဖြစ်တဲ့ သေရည်အရက်များကို သောက်သုံးခြင်းအမှု တို့ကို ရှောင်ကျဉ်နိုင်ကြရင်တော့ လက်ရှိဘဝတွေမှာလည်း သာသာယာယာရှိကြမှာဖြစ်သလို၊ သံသရာမှာ လည်း လွတ်မြောက် ရာရေကန်ကြီးထဲရောက်ကြရပြီး အဲ့ဒီကတဆင့် မဂ်ဖိုလ် နိဗ္ဗာန်ကို လျှောက်လှမ်းနိုင်တဲ့ လူတွေဖြစ်နိုင်ကြပါမယ်လို့ ဘုရားဟောတွေထဲမှာ ကြားနာ ဖတ်ရှုခဲ့ရဖူးပါတယ်။
လူတိုင်းလူတိုင်း အိမ်ထောင်ရေးသာယာပြီး ကလေးငယ်တိုင်း ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့နိုင်ကြပါစေ လို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 4:05 PM3comments
ခေတ်မှီိတိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ကောင်းတာတွေရှိသလို မလိုအပ်တဲ့ ဘေးဒုက္ခတွေ ကလည်း ပြောလို့မကုန်နိုင်အောင်ပါပဲ။ သတင်းတွေထဲမှာ ကလေးတွေသောက်သုံးတဲ့ နို့မှုန့်တွေထဲ မထည့်သင့်တာတွေကို ဈေးကွက်မှာရောင်းကောင်းအောင်ဆိုတဲ့ လောဘ တခုတည်းကြည့်ပြီး ထည့်ခဲ့တဲ့ မသမာတဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေကြောင့် ကလေးသန်းပေါင်းများ စွာ ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေ၊ ဂျပန်က Nissin ကုမ္ပဏီနဲ့ Myojo ကုမ္ပဏီတွေက ထုတ်လုပ်တဲ့ ခေါက်ဆွဲခြောက်တွေမှာ ပိုးသတ်ဆေးတွေ တွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေ ကြောင့် အရင်ကတည်းက ခေတ်မှီအောင်ထုပ်ပိုးပြီး လှပအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အစား အသောက်တွေကို မနှစ်သက်တဲ့ ကျမဟာ ဟိုး..ငယ်စဉ်က စားသောက်ခဲ့ရတာလေးတွေကို ပြန်ပြောင်းတမ်းတ သတိရမိပါတယ်။
ကျမရဲ့မိဘတွေက လယ်သမားလူတန်းစားကနေ မွေးဖွားကြီးပြင်းလာကြတာဖြစ်ပေမဲ့ သူတို့ ကြီးပြင်းလို့ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်လို့ရတဲ့ အချိန်မှာတော့ အလုပ်သမား လူတန်းစားဘဝကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ထောင်သည်ဘဝရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ ရောက်ရှိလာကြတဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် တိုးတက်စေချင်တဲ့ စေတနာတွေနဲ့ ငွေရှာတဲ့အခါမှာ လူတန်းစား နှစ်ရပ် လုပ်ရမဲ့အလုပ်တွေကို ဇယ်စက်သလို အပင်ပန်းခံပြီး လုပ်ခဲ့ရတာကတော့ နအဖ ခေတ်မှာ လူဖြစ်လာရတဲ့ ကျမတို့ရဲ့ မိဘတွေပါ။ ကလေးတစ်ယောက်လောက်မှာ ဝန်ထမ်းလစာနဲ့ လောက်ငှသေးပေမဲ့၊ ကလေးငါးယောက်တို့ရဲ့ ဖခင်ကြီးဟာ စက်ရုံနဲ့ လယ်ယာတွေထဲမှာ ဘဝစက်ရဟတ်ကို လည်ပတ်စေခဲ့ပါတယ်။ မိခင်နဲ့တကွ ကျမတို့ မောင်နှမ တတွေကတော့ စက်ခေါင်းကြီးနောက်က နောက်တွဲလေးတွေပါရသလို လယ်ကွင်း တွေထဲမှာ ကြီးပြင်းကြရတာပေါ့။
ကျမရဲ့ မိဘတွေဟာ လယ်သမား၊ အလုပ်သမားဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို လူတွေရှေ့မှာ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုဖို့ ကျမ ဘယ်တော့မှဝန်မလေးခဲ့၊ မရှက်ခဲ့ပါ။ ဒါ့အပြင် အကယ်၍သာ မြန်မာပြည်ကြီး ဒီမိုကရေစီရလို့ လူတိုင်းလူတိုင်း သူ့နေရာနဲ့သူ နေကြတဲ့အချိန်ရောက်ရင် ကျမလိုချင်တဲ့ နေရာက လယ်သမားတယောက်ရဲ့ဘဝမျိုးပါ။ လယ်ယာတွေက ကျမကိုအဲ့ဒီလောက်အထိ ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တာပါ။ ဘဝတလျှောက်မှာ ပျော်ရွှင်ခဲ့ဖူးတဲ့၊ လွမ်းဆွတ်မိတဲ့ အရပ်ဟာလည်း ဒီလယ်ကွင်းတွေထဲမှာပဲဆိုတာ အခုချိန်မှ သိလာရတာပါ။ အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက် လို့လဲ ဒီလယ်ကွင်းတွေထဲက သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့၊ ဘာဓါတ်မြေသြဇာမှ မပါဝင်တဲ့ အသီးအနှံတွေ၊ သားငါးတွေကို စားသောက်ခဲ့ရတာကို အလွမ်းဆွတ်ဆုံးပါပဲ။ တခါတလေ ကျမရဲ့သမီးလေးတွေကို သနားမိပါတယ်။ စားစရာဆို ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထည့်ပေးထားတာ လောက်ပဲ စားရပြီး ကျဉ်းကြပ်တဲ့ ဧည့်ခန်းလေးဟာလဲ သူတို့ရဲ့ ကစားကွင်းလေးလို့ သတ်မှတ်ထားရတဲ့ လှောင်အိမ်ထဲက ငှက်ကလေးတွေလိုပါပဲ။
ကျမ အားလပ်တဲ့ရက်မျိုးတွေမှာ သမီးတို့ကို ငယ်စဉ်က ကျမတို့ မိသားစုရဲ့ ဘဝလေးတွေ အကြောင်း ပြန်ပြောင်းပြောပြနေမိပါတယ်။
တောင်တလုံးလို့ခေါ်တဲ့ရွာကလေးမှာ လယ်နဲ့ ခြံလေးနဲ့စပ်လျှက်ရှိတဲ့နေရာတခုကို ကျမတို့ မိသားစု ပိုင်ဆိုင်သလို သုံးအိမ်စုလို့ ခေါ်တဲ့ ရွာလေးမှာတော့၊ သစ်ပင်ကြီးတွေ ဝါးရုံတွေရှိတဲ့ ခြံကို ကျမတို့ ပိုင်ပါတယ်။ ကျမတို့ ငယ်ဘဝတွေက အဲ့ဒီခြံကြီးနှစ်ခုထဲမှာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာ များပါတယ်။ စာသောက်စရာတွေဆို ငွေကုန်ခံစရာမလိုပါဘူး။ ချွေတာစုဆောင်းပြီး ကလေး ငါးယောက်လုံး ပညာတတ်စေဖို့က ကြီးမားတဲ့ အဖေ့ရည်ရွယ်ချက်ပါ။ ငွေမကုန်ပဲ စားလို့ရတာ အကုန်စိုက်ပြီး ကျမတို့ကို ကြွေးမွေးခဲ့တာပါ။ အဖေ့ခြံဟာ ကျမတို့အတွက် စားစရာ မရှားပါးခဲ့ပါဘူး။ ငှက်ပျော၊ သင်္ဘော၊ မာလကာ၊ သရက်၊ ပိန္နဲနဲ့ ကြံကအစ စုံလင်လှပါတယ်။ ရာသီစာဖြစ်တဲ့ ကဇွန်းဥ၊ စိမ်းစားဥ၊ အာတာလွတ် စတဲ့စားစရာတွေအပြင် ဟင်းချက်စရာ အပင်ပေါင်းကလည်း မနည်းလှပါဘူး။ အိမ်နောက်ဖေး ဈေးဆိုင်တည်ဆိုတဲ့ အတိုင်း လိုချင်တာ အကုန်ဝယ်လို့ရတဲ့ ကျမတို့ခြံဟာ အိမ်နီးနားချင်းတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ လယ်ကွင်းထဲက ကောက်ညှင်းဆန်ရသလို၊ ကောက်ညှင်းကနေဖောက် လို့ရတဲ့ ပေါက်ပေါက်ကို ထန်းလျှက်နဲ့ဆုပ်ပြီးစားရတဲ့ ပေါက်ပေါက်ဆုပ်ကိုလည်း အမေက လုပ်ပေးပါတယ်။ ကောက်ညှင်းစပါးနုနုကို ထုပြားပြီးလုပ်ရတဲ့ မုန့်ဆန်း ဆိုတာကိုလဲ လယ်ထဲက ရပါသေးတယ်။ ကိုယ့်လယ်ထဲကထွက် တဲ့ စပါးကို စပါးကျီထဲထားပြီး လိုအပ်တဲ့အချိန်မှထုတ်ပြီး ဆန်စက်မှာ ကြိတ်ခွဲတဲ့လတ်ဆတ်တဲ့ ဆန်ကိုချက်တဲ့ ထမင်းက ရတဲ့ထမင်းရည်ဟာလည်း ကျမတို့အတွက် တော်တော်အာဟာရ ဖြစ်စေပါတယ်။ ထမင်းရည်ငှဲ့ပြီးတာနဲ့ ဥစားကြက်မလေးရဲ့ ဥကိုဖောက်ထည့်ပြီး သကြားနဲ့ ဆား အနေတော်ထည့်ပြီး သောက်ရတဲ့အရသာဟာ အခုကလေးတွေသောက်နေရတဲ့ နို့ထက် သာပါတယ်။
စပါးရိတ်သိမ်းပြီးချိန်မှာတော့ လယ်ကွက်တွေကို အနားမပေးထားပါဘူး။ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ ပဲလွန်း၊ ဘိုကိတ်ပဲ နဲ့ ပဲတောက်ရှည်တွေ၊ ပြောင်းဖူးပင်တွေကို တနှစ်နဲ့ တနှစ်မထပ်စေရအောင် စိုက်ပျိုး ရပါတယ်။ ထွက်လာတဲ့မြေပဲနဲ့ နှမ်းတို့ကတော့ ဆီအတွက်လုံလောက်အောင် ထားရပါတယ်။ လယ်ကွက်တွေထဲမှာ စပါးတမျိုးထဲမဟုတ်ပဲ၊ တခြားအပင်တွေကို အလှည့်ကျ စိုက်ပျိုးပေးခြင်းအားဖြင့် လယ်ကွက်အတွက်မြေသြဇာ ဖြစ်စေတယ်လို့ အဖေကပြောပြဖူး ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လယ်ကွက်တိုင်းမှာ ဘယ်အပင်စိုက်စိုက် ရတယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့အပင်တွေက မြေသြဇာကို စုပ်ယူသွားတတ်တာလည်း ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်လယ်ကွက် အကြောင်း လယ်သမားတိုင်း ကောင်းကောင်းသိထားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့လယ်အတွက် ကောင်းမယ့်အပင်တွေကို ရွေးစိုက်ကြပါတယ်။ လယ်သမားအတွက် အတတ်ပညာကလည်း သူ့ဟာသူရှိပါတယ်။ ရှေးခေတ်က လယ်သမားတိုင်းဟာ သူတို့သား တွေကို သူများလယ်မှာ သူရင်းငှား အနည်းဆုံးသုံး၊ လေးနှစ် လုပ်စေပြီးမှ မိမိပိုင်တဲ့လယ်တွေကို ပြန်လုပ်စေပါတယ်။ ပညာတွေရအောင်လို့ရယ်၊ ဝန်ထမ်းမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်လယ်နဲ့ကိုယ်ပဲဆိုပြီး အစကတည်းက ပေါ့ပေါ့လျှော့လျှော့ လုပ်တဲ့အကျင့် မဖြစ်အောင်လို့ရယ် ဒီလိုလုပ်ကြတာလို့ အဖေကပြောပြဖူးပါတယ်။ အဖေငယ်စဉ်ကလည်း ဒီလိုပဲ လယ်သမားတယောက် တတ်သင့် တဲ့ ပညာရပ်တွေကို သူရင်းငှားနှစ်နဲ့ချီလုပ်ပြီး သင်ယူခဲ့ရတာပါ။ ဒါကြောင့်လဲ လယ်ယာ၊ ခြံမြေတွေကို အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျမတို့ အရွယ်ရလာတဲ့ အချိန်မှာ အဖေလယ်မလုပ်တော့ပါဘူး။ ကျမတို့ ဂုဏ်ငယ်မှာ ကြောက်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဖေလယ်လုပ်တဲ့အတွက် ဂုဏ်ငယ်တယ်လို့လည်း ကျမတို့ မောင်နှမအားလုံး ဘယ်သူမှ မထင်ကြပါဘူး။ အဖေလယ်မလုပ်တော့တဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ လယ်ထဲကို ထီးဆောင်းလာပြီး၊ လယ်အကြောင်း ဘာမှနားမလည်တဲ့ လူတွေက လယ်တွေမှာစပါးကို နှစ်သီးစား၊ သုံးသီးစား စိုက်ရမယ်လို့ အမိန့်ထုတ် ပြန်လိုက်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဖေလည်း လယ်သမားဘဝကို စိတ်မကုန်ပေမဲ့ စိတ်ပျက် ခဲ့ပါတယ်။ ကျမတို့လည်း ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာလယ်ကွင်းတွေနဲ့ ဝေးခဲ့ရပါတော့တယ်။
လူတိုင်း သူ့နေရာနဲ့သူ နေနိုင်ခွင့်လေး ရကြစေချင်ပါတယ်။
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 4:14 PM3comments
သူများဘလော့တွေကို လျှောက်လည်ပြီး သူများတွေလို ထွေရာလေးပါးပြောချင် ရေးချင်တာ လေးရေးရအောင်ဆိုပြီး ဘလော့လေးတခုလုပ်မိပါတယ်၊ နေ့တိုင်းပဲ အဆူခံနေရတယ်။ ကိုယ်ကလည်း ကိုယ်ပဲလေ။ မလုပ်တတ်တာကို စပ်စပ်.. စပ်စပ်လုပ်ပြီး လျှောက်ပြင်တော့ ဘလော့ကြီးက ပျက်ကုန်တာပေါ့။ အေးအေးဆေးဆေး စာရေးနေတာကမှ ဟုတ်သေးတယ်။ ရှည်ပြီးလျှောက်လုပ်တော့ အပြောခံရတော့တာပေါ့။ နောက်တခါပျက်ရင် မလုပ်ပေးတော့ဘူး တဲ့။ စောစောစီးစီး ကျေးဇူးတင်စကားလေး ပြောထားမှဖြစ်မယ်။ နို့မဟုတ်ရင် အကြောင်းမသင့်လို့ မှားလုပ်မိတာလေးများရှိရင် ပြန်ပြင်ပေးချင်အောင်လို့လေ.. ဟဲဟဲ ..။
ကျမကတော့ သူများတွေလို ကျေးဇူးတင်ရမဲ့လူက သိပ်မများပါဘူး။ လောလောဆယ် ကိုယ့်ဘလော့မှာ ထိပ်ဆုံးကတင်ထားတဲ့ သူ ပေါ့နော့။ သူကပဲ ဒီဘလော့လေးကို လုပ်ပေး တာဆိုတော့.. နားငြီးတော့နည်းနည်းခံရတာပေါ့နော်… ဘာဖြစ်ဖြစ်လေ .. သူ့ကြောင့်ပဲ ဘလော့လေးက လန်းဆန်းလာတာဆိုတော့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည်ပေါ့နော်.. ။
နောက်ထပ် ကျေးဇူးတင်ရမဲ့ သူကတော့ မှန်မှန်လာအားပေးပြီး ကွန်မန့်တွေရေးပေးတဲ့ ဒူကဘာ၊ ကျမရေးထားတာလေးတွေကို တကူးတကနဲ့ ပိုစ်တင်ပေးတဲ့ နော်မန်၊ ရေးထားတာတွေကို စောင့်ဖတ်ပေးကြတဲ့ စာဖတ်သူတွေ အားလုံး၊ အထူးသဖြင့် c-box ထဲမှာ ခြေရာလေးများချန်သွားခဲ့ကြတဲ့.. သစ်နက်ဆူး၊ မဗေဒါ၊ ရောင်ပြန်၊ ဟန်လင်းထွန်း… စသဖြင့် အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါကြောင်း …
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 2:58 AM2comments
ကိုးရီးယားရုပ်ရှင်ကားလေးကြည့်ပြီး ဇတ်လမ်းထဲက မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေရဲ့ ပျော်စရာအခန်းလေးကြည့်လိုက်ရလို့ ကိုယ့်စိတ်ထဲ ပျော်ရွင်နေတုန်း၊ ဘလော့တွေကို ကြည့်မိပါတယ်(လူမဆန်သော ရက်စက်မှု)။ မတရားနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်နေလိုက်တာများ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းမှ ဟုတ်ပါသေးရဲ့လားလို့ ထင်မိလာတယ်။ ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးရင်ထဲမကောင်းလို့ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ့်ဖာသာ ပြန်ဆန်းစစ်နေမိတယ်။ တခဏတည်းမှာ စိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာ ပေါ်လာတဲ့ အာရုံတွေပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနေတာ မပြီးဆုံးနိုင်အောင်ပါပဲ။ ထင်လာတဲ့အာရုံတွေပေါ် လိုက်ပြီး ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ စိတ်တွေအပေါ်မှာ မမြဲတဲ့ အနိစ္စတွေပဲဆိုတာကို သတိမထားပဲ လောဘ၊ ဒေါသတွေနဲ့ ကိုယ်ရဲ့နေ့ပေါင်းများစွာတွေကို ဖြတ်သန်းလာခဲ့တာ ကိုယ်ရှင်သန်ရမဲ့ သက်တမ်းရဲ့ ထက်ဝက်နီးပါရှိနေပြီ ဆိုတာကိုထိတ်လန့်စွာဆင်ခြင်မိလာပါတယ်။ အဲ့ဒီိလို ဆင်ခြင်မိလာတာနဲ့ တပြိုင်နက်တည်း ကျေးဇူးတော်ရှင် ဝေဘူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ကြွေးပြေတရားတော်ကို ပြန်လည်နှလုံးသွင်းမိပြီး စာဖတ်သူတို့ကိုလည်း ဝေမျှလိုတာကြောင့် ဒီပို့စ်လေးကို တင်ဖြစ်သွားပါတယ်။
ကျေးဇူးရှင် ဝေဘူဆရာတော်ဘုရားကြီး ကြွေးပြေတရားတော်
ကျေးဇူးရှင်ဝေဘူဆရာတော် သီတင်းသုံးရာ ဝေဘူချောင်၌ လပြည့်လကွယ် သီတင်း နေ့များ၌ ဆရာတော်ဘုရားသည် သံဃာတော်များနှင့် သိမ်ဝင်ပြီး သိမ်မှ သံဃကိစ္စ ပြီးစီိးသောအခါ တရားပလ္လင်သို့ကြွလာကာ တရားချီးမြင့်တော်မူပါသည်။ ယခု (၁၃၃၃-ခုနှစ်) ဝါခေါင်လကွယ်နေ့က ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် အဋ္ဌင်္ဂသီလချီးမြင့်ပြီးနောက် မိမိတို့ ဆောက်တည်သည့်သီလကို ပြည့်အောင်ဖြည့်ကျင့်ကြပါက မိမိတို့အလိုရှိရာ ဗောဓိဆုနှင့် စံဝင်နိုင်ကြောင်းမိန့်တော်မူပြီးလျှင် အောက်ပါအတိုင်း မေးမြန်းစစ်ဆေးပြီး ဟောကြားတော် မူပါ၏။
ဒီနေ့တော့ ဥပုသ်နေ့ဆိုတော့ တို့က ကနေ့အဖို့ပဲ မေးပါမယ်ဗျာ၊ သူတို့ အရုဏ်တက်ကနေ ဒီနေ့တော့ ဥပုသ်နေ့ပဲဆိုပြီး သီလဆောက်တည်ကြပြီးကတည်းက အခုအချိန်ထိ ဘုရားအဆုံးအမနဲ့ နေကြထင်ပါဗျား။ ဟုတ်ကြရဲ့လား။
ဟေ… ဒါဖြင့် ဘယ်လိုများ နေကြလဲ။ ( နေတဲ့အခါနေပါတယ် ဘုရား။ လွတ်တဲ့အခါလဲ လွတ်ပါတယ်ဘုရား။)
ဘယ်လောက်များလွတ်ပြီး ဘယ်လောက်များနေကြလဲဗျား။ (မဖြေကြပါ)
ထိုအခါ ဆရာတော်က ငြိမ်နေပုံထောက်တော့ တောက်လျှောက်နေကြ ထင်ပါဗျား။
အေး… ဒါဖြင့်မေးဦးမယ်ဗျာ။ လျှပ်တစ်ပြက်အတွင်းမှာ စိတ်ဟာ ဘယ်လောက်ပျက်သတဲ့ တုန်းဗျာ။
အေး… စိတ်ထဲမှာ ဣဋ္ဌာရုံရယ်၊ အနိဋ္ဌာရုံရယ် တမျိုးစီပေါ်နေတယ် မဟုတ်လား။
အေး… အဲ့ဒီဣဋ္ဌာရုံနဲ့ အနိဋ္ဌာရုံတို့ဟာ ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာများ ရှိသလားဗျာ။
မရှိပါဘုရား။ တမျိုးမဟုတ်တမျိုး ပေါ်နေပါတယ်ဘုရား။
အင်း… အဲ့ဒီလိုပေါ်ပေါက်နေတာက သံသရာတလျှောက်မှာ မိမိတို့ပြုခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့် ကလျာဏ မိတ္တဖြစ်တဲ့ ဣဋ္ဌာရုံတွေပေါ်လာတော့ ဘယ်လိုဖြစ်သလဲ။
လောဘဖြစ်စေတာက ကုသိုလ်လား၊ အကုသိုလ်လား။
ပါပမိတ္တဖြစ်တဲ့ အနိဋ္ဌာရုံတွေ ပေါ်လာတော့ကောဗျာ။
ဒေါသဖြစ်တော့ ကုသိုလ်လား၊ အကုသိုလ်လား။
အေး… အဲ့သလို ကောင်းတဲ့အာရုံပေါ်လို့ လက်ခံလိုက်ပြန်ယင်လဲ နှစ်သက်မှု တဏှာ၊ လိုချင်မှု လောဘတွေဖြစ်တော့ အပါယ်ကိုသွားစေတဲ့ အကုသိုလ်ပဲ မဟုတ်လားဗျာ။
မကောင်းတဲ့အာရုံပေါ်လို့ သိမ်းပိုက်မိပြန်ယင်လဲ စိုးရိမ်မှု သောက၊ ဒုက္ခ ဒေါသတရားများ ဖြစ်စေပြန်တော့လဲ အပါယ်စာ အကုသိုလ်ပဲရတယ်မဟုတ်လား။
အဲ့… ဒါဖြင့် ဒီကလျာဏမိတ္တ၊ ပါပမိတ္တများဖြစ်တဲ့ ဣဋ္ဌာရုံ၊ အနိဋ္ဌာရုံတို့ဟာ မပေါ်ပဲ ဘယ်အခါမှာနေတုန်းဗျာ။
ဘယ်အခါမှ မနေပါဘုရား။ အမြဲပေါ်နေပါတယ်ဘုရား။
အေး… အဲ့ဒါတွေက သံသရာတလျှောက် ကိုယ်ပြုခဲ့တဲ့ အမှုတွေပဲဗျာ။ အဲ့သလို ဘယ်သူမပြု မမိပြုခဲ့တဲ့ ကလျာဏမိတ္တဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပါပိတ္တဘဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ပေါ်လာရင် ကိုယ့်မှာဘာရသလဲ။
အေးဟုတ်တယ်၊ ကောင်းတာဖြစ်တော့ နှစ်သက်မှုတဏှာနဲ့ လိုချင်မှု လောဘဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတဏှာတို့ လောဘတို့က ဘာမှုတွေလဲဗျာ။
အေးဗျာ… လောဘကလည်း မီး၊ တဏှာကလည်း မီး၊ ဒေါသကကောဗျာ။
အေး… အဲ့ဒီတော့ ဘာပေါ်ပေါ် မီးလောင်ခံရတာပဲ မဟုတ်လားဗျာ။
အဲ့ဒီတော့ သူတို့ ပေါ်ချင်တာ ပေါ်ပါစေ၊ ကိုယ်က ဘုရားအဆုံးအမနဲ့နေတော့ သူတို့ဝင်လို့ရသလားဗျာ။
အေး… ဘုရားအဆုံးအမနဲ့သာ ကိုယ်ကနေတော့ သူတို့ဝင်ခွင့်မရတာပေါ့ဗျာ။
ဘုရားရှင်ရဲ့ အဆုံးအမဟာ ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ အနောတတ္က ရေအိုင်ကြီးနဲ့ တူတယ်။ အဲ့ဒီရေအိုင်ထဲကို လောဘမီး၊ ဒေါသမီး ဘာမီးတွေပဲကျလာလာ ရေထဲကျ မီး ငြိမ်းသွားရသလို ဘယ်မှအလောင်မခံရတော့ဘူးဗျာ။ ကြားလား။
အေး … ထပ်မေးရအုံးမယ်။ မျက်စိတစ်မှိတ် လျှပ်တစ်ပျက်အတွင်း ဘယ်လောက် ပျက်သတုန်း။
အေး… ကုဋေတစ်သိန်း ဖြစ်ပျက်တွေကိုသိမှ အဓိပညာလို့ ခေါ်တယ်ဗျာ။ အဲဒီတော့ ခန္တာအစဉ်မှာ ဖြစ်ပျက်တဲ့တရားကို သိမှဗျာ။ ဘုရားရှင်ရဲ့ အဆုံးအမအသိနဲ့ မနေယင် ခုတင်ကပြောခဲ့တဲ့ ဘယ်လောက်တဲ့လဲဟဲ့။
အေး… လျှပ်တစ်ပြက်အတွင်းမှာ ဖြစ်ပြီးပျက်သွားတဲ့ ကလျာဏမိတ္တ၊ ပါပမိတ္တ ကုဋေ တစ်သိန်းဟာ ကိုယ့်မှာ ကြွေးတင်တာပါပဲဗျာ။ ဟုတ်ရဲ့လားဗျာ။
ခန္တာမှာ အစဉ်ပေါ်နေတဲ့ ဣဋ္ဌာရုံနဲ့ အနိဋ္ဌာရုံတွေဟာ ဘယ်သူပြုနေတာလဲဗျာ။
ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြုတာပါ ဘုရား။
အေး… ကိုယ်ပြုခဲ့တဲ့ သံသရာတလျှောက်လုံးက ပါလာခဲ့တဲ့ ကြွေးတွေကို ခုချိန်ထိ ဘုရားရှင်ရဲ့ အဆုံးအမနဲ့ စိတ်ကလေးကို မထားယင် လျှပ်တစ်ပြက်အတွင်း ကုဋေတစ်သိန်း ကြွေးထပ်တင်ပြန်တော့ ကြွေးတွေရေတွက်လို့ ရပါဦးမလားဗျာ။
အေး… အဲ့ဒါကြောင့် ဘုရားရှင်အဆုံးအမနဲ့ နေကြဗျာ။ ဒါမှ သူ့ဘာသာသူ ဖြစ်ပြီး ပျက်သွားတာကို ကိုယ်ကမယူတော့ ကြွေးတွေကြေကုန်တာပေါ့ဗျာ။ ဟုတ်ရဲ့လား။
ကိုယ်က မယူတော့ ကြွေးသစ်လည်းတိုးသေးသလားဗျာ။
အဲ့ဒီတော့ ကြွေးသစ်လည်းမတင်တော့။ ကြွေးဟောင်းလည်းကြေပြီး၊ ဖြစ်ပြီးပျက်သွားတာကို သိမှ အဓိပညာဗျား။
အေး… ဒီတော့ ဘုရားရှင် အဆုံးအမဖြစ်တဲ့ အသိစိတ်ကလေးနဲ့ နေဖို့ရာက ဘယ်နေရာမှာမှ နေလို့ဖြစ်တယ်လို့ ကန့်သတ်ထားချက် ရှိသေးသလားဗျာ။
တစ်ယောက်ထဲနေယင်ရောဗျာ ဖြစ်ရဲ့လား။ ဖြစ်ပါတယ်ဘုရား။
အေး… အဲ့သလို ကန့်သတ်ချက်မရှိ ဣရိယာပုတ် လေးပါးလုံးလဲဖြစ်၊ တစ်ယောက်ထဲလဲဖြစ်။ အများနဲ့လည်းဖြစ်။ ဟုတ်ရဲ့လားဗျာ။
အေး… ဟုတ်ပြီ။ ဘယ်မှာနေနေ နေလို့ရပြီ။ ပိုက်ဆံကော ကုန်ရဦးမှာလားဗျာ။
အချိန်ကော သီးခြား ယူရသေးလားဗျာ။
ဒါဖြင့် ဘယ်ဟာများ ခက်သတုန်း။ ထားရတာကောပင်ပန်းလို့လားဗျာ။
အေး .. ဒါဖြင့် ဘယ်ဟာခဲယဉ်းသတုန်း။
အေးပေါ့လေ၊ သူတို့ကဟိုဥပမာလိုပေါ့ဟယ်။ နင်တို့စီးပွာရှာတာ သိပ်အများကြီးရတော့ ဘေးလူတွေက ခင်ဗျားတို့ ရွေတွေ ငွေတွေ ဘယ်လောက်ရသလဲလို့ မေးတော့ ပြောကြမှာလားဗျာ။
ဘာကြောင့်လဲ။ ။ မပြောအပ်လို့ပါဘုရား။
အေး… အဲ့သလိုပ၊ ရွေငွေနဲ့ တရားရတနာ ဘယ်ရတနာက မြတ်သလဲ။
အေး… အဲဒါကြောင့် တို့ဒါယကာ ဒါယိကာမကြီးတွေက ဖွင့်မပြောကြတာပါလေ။ ယခု ဘယ်အချိန်ရှိပါသလဲ။
အေး… အာရုဏ်တက်ရဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ရသေးလဲ။
၁၀- နာရီလောက်ရပါသေးတယ် ဘုရား။
အေး…အေး…၊ သူတို့က တဆက်တည်း ဆောက်တည်ကြမှာ ထင်ပါရဲ့ဗျာ။ ကြွေးတွေပြေအောင် ကြိုးစားကြဗျာ။ အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ ဝီရိယနဲ့ ကုသိုလ်တရားတွေက စောင့်နေပါတယ်ဗျာ၊ အကျိုးပေးမလို့ပါ။ ကဲ.. ကဲ အားလုံးလဲ အောင်ကြပါပြီဗျာ။
သာဓု… သာဓု… သာဓု…။
( မှတ်ချက်။ ။ ဓမ္မာစရိယဦးဌေးလှိုင်၏ ရတနာသုံးပါဂုဏ်ကျေးဇူး စာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြ ပါသည်။ )
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 2:16 AM 1 comments
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 5:08 PM2comments
အိပ်ယာကနိုးနိုးခြင်း ခန္တာကိုယ်က အရိုက်ခံထားရသလိုနာကျင်နေတယ်။ သေသေချာ ချာစဉ်းစားလိုက်မှ ကိုယ်ဝန်ဖျက်နေတာ တပတ်တိတိရှိပေမဲ့ ဘာမှထူးခြားမလာသေးတာပဲ။ သွေးနည်းနည်းဆင်းတာလောက်ပဲရှိတယ်။ ကျမဘဝတလျှောက် ခံစားခဲ့ရတဲ့ နာကျင်မှုတွေက ချစ်ခြင်း၊ မုန်းခြင်းတွေကို ဥပေက္ခာပြုနိုင်နေသလိုပဲ။ မိသားစုဘဝလေးဆိုတာကို မရဲတရဲလေး မျှော်လင့်ခဲ့ဖူးပေမဲ့၊ အခု ဝမ်းနဲ့လွယ်ထားရတဲ့ကလေးကို ဖျက်ချတော့လဲ ကြေကွဲဝမ်းနည်းမှု တွေဖြစ်မလာပါဘူး။ သာမန်ကိစ္စတခုလောက်ပဲ ကျမခံစားချက်ရှိတယ်။ ကျမဒီဒုက္ခ တွေကနေ မြန်မြန် လွတ်မြောက်ချင်တယ်။ မဝေးတော့သောကာလတခုမှာ ကျမမိသားစုရှိရာကို ပြန်ရောက်တော့မှာပဲလေ။ `“နင့်ကိစ္စက လုပ်လို့မရတော့ဘူး” တဲ့.. ဒေါ်ဘုမက ပြောလာတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ `“နင့်ဟာက ရင့်နေပြီ.. အားလုံးအပြီးအစီးဆို နောက်ထပ်ငွေ တသောင်းလောက်ထပ်ကုန်မယ်” တဲ့။ အစကတည်းက ခြောက်လကျော်ရှိနေ တဲ့ ကိုယ်ဝန်ကိုဖျက်ချပေးနိုင်တယ်လို့ အာမခံထားလို့ ရှိသမျှငွေလေး အကုန်ခံပြီး လာပါ တယ်ဆိုမှ အခုတော့ရင့်နေလို့ တဲ့။ ပိုက်ဆံထပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ ကိုယ်ကဘာဝင်ငွေရှိလို့ ဘယ်သူကထောက်ပံ့နေလို့လဲ။
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 1:14 PM3comments
ကိုယ့်အိုးကိုယ့်အိမ်လေးနဲ့နေရတဲ့ဘဝဆိုတာ ကျမငယ်စဉ်က ခဏလေးပဲရခဲ့တာပါ။ အခုချိန်မှာ ကိုယ်ကိုတိုင်ဖန်တီးခွင့်ရတော့မှာဆိုတော့ ကျမစဉ်းစားရင်းတောင်ဝမ်းသာမိပါ တယ်။ ကျမဒီတသက် ဒီလိုမိသားစုဘဝမျိုးလေး ပြန်မရနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ထားခဲ့မိလို့ပါ။ မိသားစုဘဝလေးတခုအတွက် ကျမအိပ်မက်မက်ခဲ့ရတာ လပိုင်းလောက်ပဲကြာပါတယ်။ ကံကြမ္မာမှုန်တိုင်းက ဖျက်လိုက်ပြန်တယ်။ ကျမမှာကိုယ်ဝန်ရှိလာတော့ အိမ်ရှင်တွေကမေး လာတယ်။ ကျမကတော့ ခပ်ရဲရဲပဲပြန်ဖြေလိုက်တယ်လေ။ ကျမယောက်ျား`“ဖိဘွန်း” ဆိုတာ။ ဒါကို ကျမရဲ့သဌေးက ဆိုးဆိုးဝါဝါးလုပ်ရပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ကျမကိုနှင်ချခဲ့တယ်။ ကံဆိုးမ သွားရာ မိုးလိုက်လို့ရွာဆိုတာ တကယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ကျမအတွက်ကတော့ ခံစားရသိပ် ခက်ပါတယ်။ ဖိဘွန်းနေတဲ့ အခန်းလေးကိုရှာဖွေပြီး ကျမလိုက်သွားတော့ စိမ်းစိမ်းကားကားနဲ့ ကျမကိုမောင်းထုတ်တယ်လေ။ သူနဲ့အတူနေလို့မရဘူးတဲ့။ ဘာတွေဖြစ်ကုန်မှန်းမသိတော့ တဲ့ကျမ ရဲစခန်းမှာသွားပြီးအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့ဘာလုပ်လုပ်ကျမခံတော့မယ်။ ထောင်ထဲ ဆိုလည်း နေစရာရှိသေးတယ်လေ။
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 2:27 AM0comments
သမီးတွေမနက်ကျောင်းသွားချိန် ကျောင်းကားဆီကို လိုက်ပို့ရလေ့ရှိပါတယ်။ သိပ်မအေးတဲ့အချိန်မှာ သူတို့အဖိုးက လိုက်ပို့ပေးပါတယ်။ ကားမလာခင်မှာ ဒီလိုပဲစောင့်နေရလေ့ရှိပါတယ်။
ကားလာပြီဆိုလျှင်တော့ တန်းစီပြီးစနစ်တကျတက်ကြရပါတယ်။ ကားမောင်းတဲ့သူက ကလေးအရေအတွက်ကို သူ့မှာပါတဲ့စက်ကလေးနဲ့ မှတ်ထားရတယ်။ ကားပေါ်ရောက်တဲ့ခလေးတွေအားလုံးရဲ့ လုံခြုံရေးက သူ့တာဝန်ဖြစ်သွားပြီ။ ကားရပ်လိုပ်တာနဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် STOP ဆိုတာက ကားတံခါးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ပေါ်လာပြီး အရှေ့ကဖြစ်ဖြစ် အနောက်ကဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ကားမှဖြတ်ကျော်မောင်းလို့မရတော့ဘူး။
ကလေးတွေ တက်တက်၊ ဆင်းဆင်း လုံခြုံရေးအတွက် အခြားကားတွေက ရပ်ထားကြရတယ်။
သူတို့ကားပေါ်တက်သွားပြီဆိုရင်တော့ ပို့ပေးရတဲ့ မိဘတွေက တာဝန်ကြေပြီ။ ကျန်တာက ကားမောင်းသူနဲ့ ကျောင်းက ဆရာ၊ ဆရာမတွေက ဒီကလေးတွေ လုံခြုံဖို့ ဆက်တာဝန်ယူကြလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြန်ပြီး လုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်တွေကို ဧဧချမ်းချမ်းလုပ်လို့ရတယ်။ ဘာမှသိပ်ပြီးပူစရာမလို။ ဒီမှာနေရတာ ကိုယ့်တစ်မိသားစုအတွက်ကတော့ဘာမှပူစရာမရှိပေမဲ့ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ပျော်ကြည့်လို့ကိုမရပါဘူး။ ကျမတို့မှာ ဘာကြိမ်စာတွေများ ရှိခဲ့ကြသလဲမသိဘူး။ ဧချမ်းစွာနေလို့ရတဲ့နေရာမှာတောင် ဧချမ်းစွာနေထိုင်လို့မရဘူး။ အချိန်ရှိသမျှ ဒုက္ခခံနေကြရတဲ့ ကိုယ့်သွေးသားချင်းတွေကိုပဲ မေ့လို့မရနိုင်အောင် စိတ်ဖိစီးနေကြရတာ။
သူတို့လေးတွေအရွယ်ရောက်လာကြရင်တော့ သူတို့တိုင်းပြည်က ဒုက္ခတွေပင်လယ်ဝေနေကြတဲ့ သူတို့ရဲ့ ညီကိုမောင်နှမတွေကို တနည်းနည်းနဲ့ ကူညီနိုင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းရအုံးမယ်။သူတို့မှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်လေ...
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 4:46 AM0comments
တို့ အဖိုးအဖွားရဲ့.. ဘိုးနဲ့ဘွားတွေ..
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 6:28 AM0comments
ကျမမှာအဖော်လုပ်စရာ ကိုယ့်လူမျိုးက ကိုယ့်ဌာနမှာမရှိလေတော့ ရှိကြတဲ့ တခြား လူမျိုး လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ဘဲ ထမင်းစားချိန်၊ နားချိန်တွေမှာ အဖော်လုပ်ပြီး စကားပြော ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမရဲ့စကားပြောဖော်တွေကတော့ စက်ရုံမှာအများဆုံးဖြစ်တဲ့ ဗီယက်နမ်တွေပါ ဘဲ။ လာအို သူလေးတယောက်လည်းရှိသေးတယ်။ သူတို့တတွေက ငယ်ငယ်လေးထဲက ရောက်နေကြတာ။ ထမင်းစားချိန်ဆို သူတို့နဲ့အတူစား၊ အတူပွားကြတာပေါ့။ ဒီမှာ.. ဗီယက်နမ်တွေအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင် သူတို့က အမေရိကားရောက် ဗီယက်နမ်တွေမို့ ဆိုပြီး အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့။ မျိုးချစ်စိတ် သိပ်ပြင်းတာ။ သူတို့လူမျိုးအခြင်းခြင်း ဘယ်တော့ မှ အင်္ဂလိပ်လိုမပြောဘူး။ သူတို့စကားပြောပြီဆိုရင်လည်း သူတို့အုပ်စုထဲကို တခြားဘယ်သူမှ စကားဝင်ပြောလို့ မရတော့ဘူး။ ကျမတို့ဆီက စကားပုံတွေနဲ့ပြောရရင် ကုလားတိုက် ကျားဝင်ဆွဲသလို လို့ပြောရမလား၊ ဒါမှမဟုတ် မွန်တစု စကားပြောပြီးလမ်းလျှောက်သွားလိုက် တာ အနောက်ကတယောက်ကို ကျားဆွဲသွားတာမသိလိုက်ဘူးဆိုတဲ့ စကားကို ကိုးကားရမ လား။
ဒါနဲ့ မွန်တွေလို့သိမ်းကြုံးပြောရင်တော့ ဒီစကားက မှားလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆို တော့ ကျမတွေ့ဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းမွန်အမျိုးသမီးတယောက်ဆို စကားပြောတာ ညင်သာလွန်း လို့။ သူ့ယောင်္ကျားနဲ့ စကားပြောနေရင် အိမ်နှစ်လုံးက ဒီလောက်ကပ်နေတာ သူ့အသံကီု သဲသဲကွဲကွဲ ဘယ်တော့မှမကြားရဘူး။ သူ့ယောင်္ကျားရဲ့တုန့်ပြန်သံကိုသာ ဘေးကကြားရ တာ။ တခါတခါ ဘေးကနေ ကို….ရဲ့ အင်း..အင်း.. ဆိုတဲ့အသံကို ကြားနေရလို့ ဘာလို့တယောက်ထဲ တအင်းအင်းနဲ့ ထောက်ခံနေတာလဲဆိုပြီး နားစွင့်လိုက်မှ မအေး. အသံကြားရတာ။ လူနဲ့သာဆိုင်တာပါ။ အားလုံးလို့သိမ်းကြုံးပြောလို့ ဘယ်ရလဲနော်။ ဒါနဲ့ တချို့ကလည်းပြောကြပါတယ်။ လူကြောင့်မဟုတ်ဘဲ.. သူတို့ရဲ့စကားကြောင့်လို့လဲ ပြောကြတယ်။ ကမ္ဘာဦးစ လူတွေဖြစ်ကာစက စကားဆိုတာ မရှိသေးဘူးတဲ့။ စကားလိုချင်ရင် ဘုရားဆီမှာသွားတောင်းရတာတဲ့။ အဲ့ဒီမှာလူမျိုးအသီးသီးက သွားတောင်းပြီးကြလို့ မွန်လူမျိုး သာကျန်တယ်တဲ့။ နောက်ဆုံးကျမှ သူတို့ကသွားတော့ ဘုရားဆီမှာ စကားကမကျန်တော့ ဘူးတဲ့။ ဘုရားကလည်း နောက်ကျမှလာရမလားဆိုပြီး စိတ်တိုတိုနဲ့ ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ ရေ ပုန်းတလုံးကို ကန်ချလိုက်တာ၊ ရေပုံးကတောင်စောင်းအတိုင်း ဂလုံ၊ ဂလွမ်မည်ပြီး လိမ့်ကျ သွားတဲ့အသံကို သူတို့စကားသံအဖြစ်ယူထားရလို့ဆိုပြီးတော့ ပြောကြတာကိုလည်း ကြားဖူး ပါတယ်။ ဒါတွေက ပျော်စရာအဖြစ်ပြောနေကြတာဖြစ်မှာပါနော်။ ကျမကကြားဖူးတာလေး ရေးတာပါ။ အခုကျမပြောချင်က ဗီယက်နမ်တွေအကြောင်း။
ထမင်းအတူစားရင်း ပြောကြတဲ့စကားတွေထဲမှာ သူ့နိုင်ငံအကြောင်း၊ ကိုယ့်နိုင်ငံအ ကြောင်းတွေလည်းပါတာပေါ့။ အိမ်နီးနားခြင်းနိုင်ငံဆိုတော့ သူတို့ကလည်းသိကြတာကိုး။ ကျမတို့ အစိုးရကို သူတို့က ကွန်မြူနစ်လို့ပြောကြတယ်။ မဟုတ်ဘူး၊ စစ်အစိုးရလို့ ကျမက ပြောတော့ သူတို့က အတူတူဘဲတဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့.. လည်ပင်းကို ဓားနဲ့လှီး တဲ့ပုံစံ လုပ်ပြတယ်။ လူသတ်တယ်ပေါ့။ ကွန်မြူနစ်က ကောင်းပါတယ်လို့ ကျမကပြောတော့ သူတို့က ကျမကိုအလန့်တကြားကြည့်ကြတယ်။ စစ်အစိုးရက ပိုဆိုးလို့ပါလို့ပြန်ပြောလိုက် ရတယ်။ ဗီယက်နမ်မှမဟုတ်ပါဘူး။ လာအိုမလေးကလဲ ကွန်မြူနစ်ဆိုကြောက်သတဲ့။
ဒါပေမဲ့ သူတို့က ခွင့်ရတိုင်း သူတို့နိုင်ငံ ပြန်လည်ကြတယ်။ နင်တို့ကို မဖမ်းဘူးလား ဆိုတော့ ငါတို့ကနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရှာပေးနေတဲ့သူတွေတဲ့။ ခုအစိုးရက အရင်ကနဲ့မတူတော့ ဘူး။ ကွန်မြူနစ်ခြင်းတူပေမဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် တိုးတက်ဖို့ကိုဦးစားပေးလာပြီတဲ့။ ကိုယ့် နိုင်ငံသားတွေ ဘယ်သူလာလာ ကြိုဆိုသလို ဘယ်သူသွားသွား ခွင့်ပေးထားပြီတဲ့။ ဗီယက်နမ် တယောက် အမေရိကန်ရောက်ဖို့က လွယ်လွယ်လေးတဲ့။ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကျမတို့ စရောက် ကတည်းက ဆက်ဆံခဲ့ရတဲ့သူတွေထဲမှာ ဗီယက်နမ်တွေနဲ့မှမလွတ်တာ။ ကျမကို အလုပ်ရှာ ပေးခဲ့ သူကလည်း ဗီယက်နမ်မလေး။ ရောက်စက သွားတွေကို သန့်စင်ပေးတဲ့ဆေးခန်းက လည်း ဗီယက်နမ်ဆရာမလေးတွေ။ ကိုယ်နေ့စဉ်စားဖို့ ပစ္စည်းတွေဝယ်တော့လည်း ဗီယက်နမ် ဆိုင်တွေ။ အခုအလုပ်အတူလုပ်ကြရတော့လည်း သူတို့တတွေနဲ့။
တနေ့ကထမင်းဝိုင်းမှာစကားပြောကြရင်း ကျမ တော်တော်လေးကသိကအောက်ဖြစ်ခဲ့ ရတယ်။ နင်တို့နိုင်ငံက တရုတ်ကိုလိုနီတဲ့။ အဖိုးကြီးတွေက ပြောကြတယ်။ မဟုတ်ပါဘူးဆို တော့နောက်တယောက်က ထပ်ပြောတယ်၊ ဟုတ်တယ်..နင်တို့အစိုရက တရုတ်ကွန်ထရိုး အောက်မှာ တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတာတဲ့။ တော်တော်လေးမခံချင်စရာဖြစ်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကိုတော့ဘာမှပြန်မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဘာပြန်ပြောရမှန်းလဲ မသိတော့ဘူး။
ဒီနေ့သတင်းနားထောင်တဲ့အချိန်မှ သူတို့ပြောတာကို လက္ခံရမလိုဖြစ်နေတယ်။ VOA သတင်းထဲမှာ ကြားရတာက၊ ဒီလောက်ဟိုးဟိုးကျော်နေတဲ့ တရုတ်နို့မှုန့်ကိစ္စကို ပညာပေး ဆောင်းပါးတွေမှာ တရုတ်ပြည်မှထုတ်လုပ်သောနို့မှုန့် ဆိုတာကိုရှောင်ပြီးရေးသားနေကြရ တယ်တဲ့။ သြော်… ဘာလို့များတရုတ်ကိုဒီလောက်ကြောက်နေကြပါလိမ့်။ ကျမက.. ပဉ္စာနန္တရိယကံ(သံဃာကိုသတ်သောကံ) ကိုတောင်ကျူးလွန်ရဲတဲ့ နအဖ က တရုတ်ကိုကျမှ ကြောက်နေလိုက်ကြတာ အံ့သြနေမိပါတယ်။
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 6:25 AM 1 comments
ဘာလိုလိုနဲ့နောက်တရာသီကို ပြောင်းသွားပြန်ပါပြီ။ Autumn လို့ခေါ်တဲ့ ဆောင်းဦး ရာသီတဲ့။ မိုးရေစက်တွေနဲ့အတူ ရွက်ဟောင်းတွေတဖွဲဖွဲကြွေလို့ Fall လို့လဲသိထားကြတယ်။ ဘာလိုလိုနဲ့ဒီမှာရောက်တာ အခုဆို ၂.နှစ်ပြည့်ပြီ။ ရောက်ကာစက ဒီအချိန်ဆိုအေးပေမဲ့ ဒီနှစ်မှာတော့တော်တော် ပူနေသေးတယ်။ သစ်ရွက် တွေကတော့ Fall color ဆိုတဲ့ လိမ္မော်ရောင်ဘက်ကို သန်းနေပြီိ။ တဖြည်းဖြည်း ရွက်ခြောက် တွေဖြစ်ပြီး မိုးဖွဲတွေနဲ့အတူ တဖြုတ်ဖြုတ် ကြွေကြတော့မှာ။ တခါကကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ Autumn Tale (ဆောင်းဦးရွက်ကြွေ ချစ်သက်သေ) ဆိုတဲ့ကိုးရီးယားကားလေးမှာလည်း ဒီကရာသီ ဥတုမျိုးနဲ့တူနေတာ တွေ့ရတော့ အာရှခြင်းတူပေမဲ့ ရာသီဥတုကွဲနေတာကို သတိထားမိတယ်။
ဒီမှာကရာသီလေးမျိုးရှိတယ်။ စက်တင်ဘာ ၂၂ကနေ ဒီဇင်ဘာ ၂၁အထိက fall လို့ခေါ်တဲ့ ဆောင်းဦးရာသီ။ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ကနေ မတ် ၂၀အထိက Winter လို့ခေါ်တဲ့ ဆောင်းဥတု။ ဒီကဆောင်းက ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံး အေးစိမ့်နေပေမဲ့ သစ်ပင်တွေကြည့်လိုက်ရင် ရိုးတံပြိုင်းပြိုင်းနဲ့ သစ်ခြောက်ပင်တွေလိုဖြစ်နေလို့ အမြင်အားဖြင့်က ကိုယ့်ဆီကနွေနဲ့တူနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဥသြသံတော့မကြားရနိုင်ဘူး။ အပူကြိုက်တဲ့ ဥသြငှက်ကဒီလောက်အေးတဲ့ နေရာကိုဘယ်လိုသတ္တိနဲ့မှလာနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ မတ်လ ၂၀ကနေ ဂျွန်လ ၂၁ထိကတော့ Spring လို့ခေါ်တဲ့ နွေဦး ရာသီ။ ဂျွန်လ ၂၁ကနေ စက်တင်ဘာ ၂၁ထိက Summer လို့ခေါ်တဲ့ နွေရာသီ။ နွေရာသီက ကိုယ့်ဆီကနဲ့ ပြောင်းပြန်။ ပူတာခြင်းတူပေမဲ့ သစ်ပင်တွေအားလုံးက စိမ်းစိုလန်းဆန်းလို့ တိုက်ခတ်တဲ့လေက အေးမြနေတာ။ ပူလောင်တာကိုသိပ်မခံစား ရဘူး။
ကိုယ့်ဆီမှာက နွေရာသီဆို ရွက်ဟောင်းတွေက လေနဲ့အတူ ကြွေကျပြီး ဥသြငှက်ကလေး တွေကလည်း ရိုးတံပြိုင်းပြိုင်း သစ်ကိုင်းတွေပေါ်မှာ ဆွေးဆွေး မြည့်မြည့်လေး အော်နေတတ်တာ။ တခါတခါ သစ်ရွက် ခြောက်တွေကြောင့် တောမီး လောင်နေတဲ့ မီးခိုးငွေ့တွေကို ဝေးဝေးကနေ လှမ်းမြင် နေရတတ်ပြီး မီးလောင်ခံ နေရတဲ့ ဝါးဆစ်တွေရဲ့ပေါက်ကွဲသံတွေကိုလည်း ကြားနေ ရတတ်တယ်။ သစ်ပင်ကြီး တွေကလည်း သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်က ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ သစ်ရွက်အို တွေကို တရွက်ပြီးတရွက် ချွေချနေကြတာကလည်း ဝမ်းနည်းစရာပါ။ ရွက်ဟောင်းတွေခြွေချပြီး တန်ခူး၊ ကဆုန်လတွေမှာ တဖြိုက်နှစ်ဖြိုက် ရွာလိုက်တဲ့မိုးလေးနဲ့အတူ ဖူးပုရစ်တွေနဲ့ ပြန်လည် သစ်လွင်လာတဲ့ သစ်ပင်ကြီးတွေက ပတ်ဝန်းကျင်ကို တမျိုးအမြင်ဆန်း စေပါတယ်။ မိုးရာသီမှာတော့ စိုပြည်စိမ်းလန်းနေတဲ့ လယ်ကွင်းပြင်တွေက မျက်စိအေး စရာပါ။ အုံ့အုံ့မှိုင်းမှိုင်းနဲ့ ရွာချလိုက်တဲ့မိုးရေတွေရဲ့အောက်မှာ ရှိရှိသမျှအပင်တွေဟာ စိမ်းစိုနေပါတော့တယ်။ လယ်သမားတွေ အလုပ်များတဲ့ကာလပေါ့။ မိုးဘယ်လောက် ရွာရွာ လယ်သမားတွေကတော့ နားဖို့အချိန်မရပါဘူး။ စပါးခင်းကြီး ရွေဝါရောင်သန်း လာရင်တော့ ဆောင်းရာသီဝင်လာပြီ။ မြည့်ဝင်းနေတဲ့ စပါးခင်းကြီးတွေက ဆောင်းရာ သီရဲ့ နှင်းစက်တွေနဲ့အတူ စိုဝင်းနေတော့တာ။ ဒီအချိန်က လယ်သမားကြီးတွေအဖို့ စိုက်ခဲ့သမျှ ရိတ်သိမ်းရဖို့ အလုပ်ရှုပ်ကြတော့မှာ။
ယခုလို မိုးဦးကျကာလ… ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ကလေးဘဝလေးက မေ့မရနိုင်တဲ့ အဖြစ် အပျက်လေးတွေကအများသားပါ။ အဲဒီထဲက ငယ်ရွယ်သေးတဲ့ကျမတို့ မောင်နှမတ စုကို ထိမ်းခဲ့တဲ့ခွေးလေးအကြောင်း သတိတရဖြစ်မိပါတယ်။ ကြောက် လန့်တကြားနဲ့ ရယ်ရမလို၊ ငိုရမလိုဖြစ် ခဲ့တဲ့ငယ်ငယ်တုန်းက ကျမတို့မောင် နှစ်မတစုရဲ့အဖြစ် အပျက်လေးတခုပါ။ အဲ့ဒီအကြောင်းပြောရင် ခွေးကလေးရဲ့ အကြောင်း ကနေ စပြောရပါလိမ့်မယ်။
ခြံလုံအောင်ခွေးကလေးတွေ မွေးထားချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အမေ့စကားကြောင့် အဖေယူလာတာကခွေးကလေးနှစ်ကောင်။ မိခင်နို့ဖြတ်ကာစလေးတွေ။ တကောင်က အောင်ပင်လယ်၊ တကောင်က ဖိုးထောင်တဲ့။ သူ့သခင်ကနာမည်ပေးထားတာ။ တဲရောက်ပြီးလို့ တရက်နှစ်ရက်ပဲနေရသေးတယ်၊ အောင်ပင်လယ်က အစာနင်ပြီး သေရှာတယ်။ ဒီမှာလိုဆိုရင်တော့ တိရစ္ဆန်ဆေးကုခန်းတွေကို အရေးပေါ်သွားလို့ရ တာပေါ့။ အော်… ကိုယ်ဆီမှာသိတဲ့အတိုင်း၊ လူကိုတောင်အနိုင်နိုင်ကုကြရတာမဟုတ် လား။ အဲ့ဒါနဲ့.. ဖိုးထောင်လေးလည်း အဖော်မဲ့သွာရှာတယ်။ လူတွေနဲ့ပဲနီးနီးကပ်ကပ် နေရင်း အမေသင်ပေးတဲ့ စည်းကမ်းတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။
ဘယ်လောက်လိမ္မာသလဲဆိုရင် အိမ်ရှေ့မှာ ငါးခြောက်စတဲ့ စားစရာတွေလှမ်း ထားရင် ကြက်၊ ငှက်ဆွဲမှာပူစရာမလိုဘူး။ ဖိုးထောင်ကစောင့်နေတာ။ သူ့အတွက် အစာကိုတောင် စားဖို့သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ ခွက်ထဲမှာမဟုတ်ရင် မစားဘူး။ တခါဆို.. အမေတောင် အတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ဘူးတယ်။ သူ့အစာခွက်ကသေးတော့ စားဖို့ ထည့်ပြီးကျန်တဝက်ကို သူ့အစာခွက်နားမှာထားပြီး တခြားအလုပ်တခု သွားလုပ် နေတာ ထပ်ထည့်ပေးဖို့မေ့သွားခဲ့တယ်။ သူ့ခမြာ အမေမလာမခြင်း ထိုင်စောင့်နေ ရှာတယ်။ အမေလည်းမေ့နေခဲ့တာ အလုပ်ပြီးလို့ တရေးတမောအိပ်ပြီး မှသတိရတာ။ သူ့ခမြာ ခွက်ဘေးကမခွာဘဲ ကြက်ငှက်မစားအောင် ကာကွယ်ထား ရှာတယ်။ တခါကလည်း မှတ်မှတ်ရရ.. ကျမတို့ဥစားဖို့မွေးထားတဲ့ ဥစားကြက်မလေး ခြံကျော်ပြီး ခြေရှည်သွားလိုက်တာ၊ အိမ်ကဘယ်သူမှသတိမထားလိုက်မိဘူး။ ဖိုးထောင် က ကြက်မလေးသွားတဲ့နေရာဘက်ကို တခြားတဖက်ကကွေ့သွား ပြီးပြန် မောင်း လာခဲ့တာ၊ ကြက်မလေးက ကိုယ်လုံးကြီးပြီးနှေးနေလို့ သူ့ပါးစပ်နဲ့ ကိုက်ချီ လာခဲ့တယ်လေ။ ကြက်မလေးကလည်း အေးအေးဆေးဆေးလိုက် လာခဲ့တာ အံ့သြစရာ တွေ့ရတယ်။ ဒီမှာဆို ဗွီဒီယိုရိုက်ပြီး (American funniest home videos AFV ) အစီအစဉ် ကိုပို့လိုက်ရင် ဆုတွေတောင် ရနိုင်တယ်။
ခွေးကလေးအကြောင်းပြီးတော့ ကျမတို့အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးရမှာပေါ့။ ကျမတို့မောင်နှမဆိုတာက ကျမနဲ့တကွ ညီမလေးတယောက်နဲ့ မောင်လေးနှစ် ယောက်ပါ။ အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အမကတော့ ကျမထက် ၇နှစ်ကြီးလို့ အပျိုဖြစ်နေပြီ။ အမ က မြို့ပေါ်ကအိမ်မှာ အဖွားတို့နဲ့နေရင်း ကျောင်းတက်နေတာ။ ကျမအောက်က အငယ်မလေးက အစိုးရိမ်လွန်ပြီး ပူပန်တတ်သူ။ ဘယ်လောက်အထိပူတတ်သလဲ ဆိုရင် အဖေတောင်အရှုံးပေးရတယ်။ တခါတုန်းက မိုးတွေအရမ်းရွာပြီး လယ်ကွင်းတွေ ရေလျှံတုန်း ကလေးတွေလှေမစီးဖူးလို့ စီးကြရပါစေဆိုပြီး အဖေက လက်ထွင်းလှေက လေးတစင်းရှာလာပြီး လယ်ကွင်းဘေးက ချောင်းရိုးသေးသေးထဲမှာ ဝါးလုံးတချောင်း နဲ့ ပဲ့ထိမ်းပြီး လိုက်လှော်ပေးပါတယ်။ အနောက်ဘက်ဆီက မိုးတွေအုံ့မှိုင်းပြီး ရွာခါနီး မိုးညှို့တက်လာချိန်မှာ ပူပင်တတ်တဲ့ ညီမလေးက ပါးစပ်ကတဖွဖွနဲ့ သူစိုးရိမ်တာ တွေကိုပြောလာလိုက်တာ၊ အဖေပါလျှက်သားနဲ့ ကျမတို့ပါ ကြောက်စိတ်ဝင်လာရပါ တယ်။ အဖေကလည်း ပျော်စေချင်လို့ လုပ်ပေးကာမှ ကလေးတွေစိတ်ဆင်းရဲနေရ တာကြောင့် အိမ်ပြန်လှည့်ရတဲ့အထိပါပဲ။
မောင်လေးတွေအကြောင်းကတော့ ထူးထူးထွေထွေမရှိ။ ဒါပေမဲ့ ကြီးစဉ်ငယ် လိုက်ဆိုတဲ့အတိုင်း၊ အကြီးတွေဝတ်လို့မတော်တော့တဲ့ အင်္ကျီ တွေကို အငယ်တွေက ဆက်ဝတ်ရတာ ဆင်းရဲ့တဲ့မိသားစုတွေရဲ့ ခြွေတာနည်းတခု ပါပဲ။ မိန်းခလေးသုံး ယောက်မွေးပြီးမှ ရောက်လာတဲ့မောင်လေးတွေခမျှာ ဂါဝန်ကိုယ်စီ ဝတ်ရသည်ပေါ့။ အဲ့ဒီအချိန်က ကျမတို့မောင်နှမလေးယောက် ချောင်းရိုးလေးတ လျှောက် လေ့လာ ရေးခရီးထွက်ကြစဉ်။
အချိန်က မိုးလေးတဖြိုက်နှစ်ဖြိုက်ရွာပြီး လယ်ကွက်တွေထဲက နှုတ်သိမ်းချိန်က ကျန်ခဲ့တဲ့ မြေပဲဥတွေက အစို့အညှောက်တွေထွက်စအချိန်။ ပဲပင်အိုတွေပေါ်က အသီးတွေကလည်း လုံလုံလောက်လောက် ရောင်းမရတော့လို့ ပိုင်ရှင်ကလည်း ခြံကာတွေဖြုတ်ပြီး ဘေးမဲ့ထားလိုက်ပြီ။ ခူးချင်သူတွေ ဝင်ခူးသွားကြ။ ကျမတို့လေး ယောက်က အဲ့ဒီလယ်ကွက်တွေထဲမှာ၊ လူကြီးဆိုတာက ကျမဘဲ။ အိမ်မှာကြော်စားရ အောင်ဆိုပြီး မြေပဲပင်ပေါက်တွေကောက်၊ ပဲသီးတွေခူး။ အမေမသိအောင်ထွက်လာပြီး အဆူမခံရအောင် လာဘ်ထိုးဘို့။ စားစရာတွေရှာလာတော့ အကူအညီရတဲ့ကလေး တွေဆိုပြီး အမေလည်းသဘောကျမှာ။ ပြောကြဆိုကြရင်း ဆက်ဆက်သွားလိုက်တာ ချောင်းရိုးလေးနားရောက်လာတယ်။ ချောင်းထဲနည်းနည်းဆင်းကြည့်လိုက်ရင်ဘဲ…. လားလား … မိုးဦးကျမှာဥနေကြတဲ့ခရုတွေ ကုန်းနဲ့ရေအစပ်တွေမှာ တန်းစီနေတာဘဲ။ ဒီခရုတွေပေါ့၊ ရှောက်ရွက်ပါးပါးလှီးပြီး သံပုရာရည်ညှစ်လို့ ငရုတ်သီးစိမ်းစပ်စပ်လေးနဲ့ အမေသုပ်ကြွေးတာ။ ဒါပေမဲ့ ဒီအတိုင်းအလုံးလိုက်မဟုတ်ပါဘူး။ သူများတွေပြုတ်၊ အဆံထုတ်ပြီး လာရောင်းတဲ့အခါ အမေဝယ်ပြီးသုပ်ကြွေးတာ။ ဒါတွေ ငါတို့ကောက် သွားရင် ပိုက်ဆံမကုန်ဘဲ အလကားရလို့ အမေ့ချီးမွမ်းခံရမှာဆိုပြီး ချောင်းရိုးတ လျှောက် ကောက်သွားကြတာ ကိုယ့်ခြံနဲ့အလှမ်းဝေးလာတာကို သတိမထားမိဘူး။ သတိထားမိလိုက်တဲ့အချိန်က ချောင်းရိုးအကွေ့၊ ဟိုးခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ ပြေးလာတဲ့ သတ္တဝါတကောင်။ နားရွက်ကိုထောင်၊ အမြီးကိုကုပ်ပြီးလုံးနေအောင်လုပ်ပြီး ပြေးလာ တာ။ ဘာပါလိမ့်လို့မှင်တက်မိနေတုန်း အငယ်မက ခွေးရူးဆိုပြီးအော်လို့ လေး ယောက်သားပြေးလိုက်ရတာ၊ ကောက်ထားတာတွေအကုန်လုံးဘယ်ဆီရောက်လို့ ရောက်မှန်းမသိတော့။ အိမ်နဲ့အတော်အလှမ်းဝေးနေလို့ အားကုန်ပြေးနေကြရတဲ့ အထဲ အငယ်မက ပါးစပ်ကလည်းပြောလာလိုက်သေးတာစုံလို့။ ငါတို့တတွေသူများ အသက်သတ်လို့ ချောင်းစောင့်နတ်က ဒဏ်ခတ်တာတဲ့။ သူပြောမှ ကြောက်စိတ် တွေပိုပိုတိုးလာပြီး ပြေးလိုက်ကြတာ ခြံနားရောက်တဲ့အထိ မောမှန်းတောင်မသိကြ တော့ဘူး။ ခြံနားရောက်ကာနီးမှ ဖိုးထောင်ကအသံပေးပြီး ပုံမှန်အတိုင်းပြေးလာတော့မှ ကိုယ့်ခွေးဆိုတာသိကြတော့တာ။ အဲ့ဒီတော့မှ ကြောက်စိတ်တွေပြေပြီး သတိထားမိ လိုက်တော့ ကျမတို့လက်တွေထဲမှာ ဘာမှပါမလာတော့ပဲ၊ အငယ်ဆုံးမောင်လေးက သူဂါဝန်လေးမပြီးလုံးထားလို့ ဖြန့်ကြည့်လိုက်တာ သူခူးထားတဲ့ပဲသီးတွေ မပစ်ချခဲ့ပဲ ကိုး။ သုံးနှစ်သားလောက်သာရှိသေးတဲ့ အငယ်ဆုံးမောင်လေးက ဘောင်းဘီမပါပဲ ဝတ်ခဲ့တဲ့ သူ့ဂါဝန်လေးထဲကို သူခူးလို့ရသလောက်ပဲသီးတွေထည့်ပြီး ကျမတို့နဲ့ အပြိုင်ပြေးနိုင်ခဲ့တာကိုပဲ အံ့သြခဲ့ကြရသေးတယ်။ အကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ကျမတို့ကတော့ ခွေးကိုပဲအပစ်ပုံချ၊ စိတ်ဆိုးနေကြပြီး လိုက်ရိုက်ခဲ့မိသေးတယ်။ အဲ့ဒီနေ့က အမေဆူတာခံရလို့ ဖိုးထောင်ကိုမကြေနပ်ကြဘူး။ အခုမှပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့.. သူသာအဲ့ဒီလိုမလုပ်ခဲ့ရင်… ကျမတို့လည်းပြန်ဖို့မစဉ်းစား… ဘယ်အထိတောင်မှ ရောက်သွားမလဲ မသိနိုင်…
ပြန်စဉ်းစားကြည့်လေ ခွေးလေးကိုကျေးဇူးတင်မိလေဖြစ်မိပါတယ်။ ဘယ်ဘဝ ရောက်နေမှန်းမသိတော့တဲ့ ခွေးလေးကို အခုမှ ကျမ ချစ်မိပါတယ်။
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 6:22 AM 1 comments
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 6:09 AM0comments
ကလေးဘဝက ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းမှုများစွာနဲ့ နေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ မိဘရဲ့မေတ္တာရိပ် အောက်က အိမ် ဆိုတဲ့နေရာလေးကို အခုချိန်မှာ ဘယ်လိုမှပြန်မရနိုင်တော့ပေမဲ့ တိုက်ဆိုင် မှုရှိတိုင်း ဆို့ဆို့နင့်နင့်သတိရနေတတ်တဲ့ လူတယောက်က ဒီသီချင်းလေးကိုနားထောင်မိရင် ငိုချင်လာမှာ သေချာပါတယ်။
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 6:06 AM0comments
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 6:03 AM0comments
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 5:59 AM0comments
ကျမရဲ့ဆင်ဦးစီးက ကျမကိုဘယ်လောက်ချစ်သလဲဆိုတာ စာဖတ်သူတွေကို သိစေချင်ရုံလေးပါ။ ကျမတို့ထိမ်းမြားပြီးကာစ ပစ္စည်းမဲ့တို့ဒေသလေးမှာပါ။ စားစရာဆန်ကလွဲရင် ကျန်တာရှာစားကြရတဲ့နေရာလေးပါ။ ရှာစားရတာက တောထဲက ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ အကောင်ဗလောင်ရယ်၊ ချောင်းထဲကငါးကလေးတွေရယ်ကို ရှာစားကြရ တာပါ။ ပိုက်ဆံရှိရင်တော့ တညအိပ်သွားရတဲ့ ဈေးဆိုင်လေးတွေရှိတဲ့နေရာမှာလိုချင်တာတွေ ဝယ်လို့ရပါတယ်။ တလကိုတခါလောက်သွားလေ့ရှိကြပါတယ်။ တလစာစားဖို့ ဟင်းချက်ရာ မှာသုံးဖို့တိုလီနဖာနဲ့၊ ဆပ်ပြာ၊ သွားတိုက်ဆေးလောက်သာပုံမှန်ဝယ်နိုင်ပြီး ဟင်းစားဖို့ ကတော့ တောတိုးရင်းဖြေရှင်းကြတာများပါတယ်။
ကျမကတောတိုးတာဝါသနာပါတယ်။ အရွက်တွေ၊ အသီးတွေခူးရတာ အရမ်းပျော်ပါတယ်။ မှိုများတွေ့ပြီဆို အပျော်ဆုံးဘဲ။ မှိုကြတော့လဲ တွေ့ခဲပါတယ်။ တွေ့ပြန်ရင်လဲ ဆင်ဦးစီးနဲ့ကျမ စကားများကြရမြဲ။ သူကမှိုကိုသိပ်မကြိုက်သလို မှိုတောင့်မှာစိုးရိမ်တတ်တယ်။ ကျမကတော့မှိုဆိုသိပ်ကြိုက်။ သူကတော့အသားဆို ဘာသားဖြစ်ဖြစ်လာထားဘဲ။ နှစ်ယောက်သားကဆန့်ကျင်ဖက်။ ဒါပေမဲ့ ပစ္စည်းမဲ့တွေပီပီ ပြဿနာတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ လူတွေကပစ္စည်းနည်းလေ ပြဿနာနည်းလေပဲမဟုတ်လား။ အခုတော့အရင်းရှင်နိုင်ငံမှာ ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေတွေကိုတွက်ချက်ရှယ်ယာခွဲရင်း တခါတခါ စကားများရလို့ ပစ္စည်းမဲ့ဒေသကိုပြန်သတိရမိပါရဲ့။
တနေ့.. နေ့စွဲအတိအကျမမှတ်မိပေမဲ့ အဲ့ဒီနေ့က ကျမမှိုရတဲ့နေ့။ သရက်ပင်ကြီးတပင်လေတိုက်လို့လဲနေတာကြာပြီ။ အဲ့ဒီပေါ်မှာပေါက်နေတဲ့မှိုတွေ။ မှိုစထွက်ကတည်းကတွေ့ပေမဲ့ စားလို့ရ၊ မရ မသေချာလို့မနှုတ်ခဲ့ဘဲ၊ နှစ်ရက်လောက်ကြာမှ တောင်ယာကပြန်လာတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံသားကရင်တစု အလုအယက်နှုတ်ကြတာတွေ့မှ ကိုယ်လည်းဝင်နှုတ်တာ ကိုယ့်မှာပါလာတဲ့ဇကာလေးနဲ့ တခါကြော်စာရခဲ့တယ်။ စားလို့ရတာသေချာတဲ့အကြာင်းပြချက်ရလို့ ဝမ်းသာအားရနဲ့အိမ်ပြန်ပြီးမှိုနှင့်တကွ အကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့ ဆင်ဦးစီးကအင်တင်တင်ဘဲ။ ဒါနဲ့ပိုသေချာအောင် ခပ်လှမ်းလှမ်းကရေချောင်းနားမှာနေတဲ့ အမိုးကြီးတို့လင်မယားဆီမှာ အတည်ပြုချက် ယူလိုက်ရသေးတယ်။ အမိုးကြီးတို့က စားလို့ရတဲ့အကြာင်းပြောမှ မှိုကြော်ဖို့ပါမစ်ကို ဆင်ဦးစီးကချပေးတာ။ ဒါတောင်ကန်ဇွန်းရွက်ပါမှကြော်ရမယ်ဆိုလို့ တောင်စောင်းနားက ရေအိုင်ဘေးမှာပေါက်နေတဲ့၊ ခူးလွန်းလို့အတက်ထွက်နှေးနေတဲ့ ကန်ဇွန်းပင်က ထွက်ကာစအညွတ် လေး၊ငါးညွတ်ကို မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်ကြာအောင် သွားပြီး ခူးလိုက်ရသေးတယ်။
မနက်စာစားပြီးဆင်ဦးစီးတရေးတမောအိပ်တုန်း ကျမလည်း ညစာချက်ဖို့အတွက် ဆန်ဗန်းရယ်၊ မှိုဇကာရယ်ယူပြီး တဲရှေ့က ကွပ်ပြစ်မှာထိုင်ပြီး ဆန်ရွေးနေတုန်း ခပ်သဲ့သဲ့အော်သံတခုကြားလိုက်ရတယ်။ ဘာသံပါလိမ့်ဆိုပြီး နားစိုက်ထောင်လိုက်ရင်း အသံကပျောက်သွားရင်းဖြစ်နေတယ်။ ဘာသံမှန်းဝေခွဲလို့မရဘူး။ တောထဲမှာက အသံအမျိုးမျိုး ကြားရပေမဲ့ ကျမ မခွဲခြားတတ်ဘူး။ မျောက်သံ၊ ချေသံ၊ ဝေးဝေးကလူအော်သံ သဲ့သဲ့ တွေဟာ ကျမနားထဲမှာ တူနေသလိုထင်ရတယ်။ အသံကပျောက်သွားလိုက်၊ ပြန်ကြားရလိုက်နဲ့ ချေအော်သံဖြစ်မှာပါလေဆိုပြီး ဆင်ဦးစီးနဲ့မတွေ့ခင်က အဖြစ်အပျက် တခုကို သတိယမိသွားတယ်။
ချေမလေးတကောင်ရဲ့ အဖြစ်ဆိုးကိုပါ။ ကျမရောက်စကပါ။ ကျမနေတဲ့တဲက ချောင်းဘေးနားမှာ။ တဲအရှေ့ချောင်းကိုကျော်ကြည့်လိုက်ရင်တောင်ချေက လူသွားလမ်းလေးကို မြင်ရတယ်။ ကျမတို့တဲအုပ်စုကတောင်နှစ်လုံးကြားကမြှောင်ထဲမှာပါ။ တနေ့ ကျောင်းဆရာတယောက်က တဲစုဘက်ကိုလာလည်ရင်းတဲရှေ့ဘက်က တောင်စောင်းမှာ ချေတစုံကိုတွေလို့ လက်ခုပ်တီးပြီးချောက်လွှတ်ပေမဲ့ ချေတကောင်က ပြေးသွားပြီး တကောင်ကျန်နေလို့ဆိုပြီး ကျမတို့ရောက်နေတဲ့တဲမှာ သေနတ်လာတောင်းပြီး ပစ်လိုက်တာ ကျောရိုးကိုရှပ်ထိသွားတယ်။ ကံဆိုးလှတဲ့ချေမလေးဟာ လူနေတဲ့ တဲတန်း ဘက်ကို အားကိုတကြီးပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ သူ့ကိုကယ်မယ်အထင်နဲ့ အပြေးလာခဲ့တဲ့ ချေမလေးကို ဝါးလုံးဆွေးတွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်လို့လဲကျနေတုန်း မူဆလင်ဘာသာဝင် စက်ဆရာ တယောက်က သူလည်းချေသားစားရအောင်ဆိုပြီး တဲထဲကဓားတချောင်းဆွဲပြီး ချေမလေးကို လည်လှီးလိုက်ပါသေးတယ်။ ဘယ်အချက်နဲ့ သေပွဲဝင်သွားရမှန်းမသိလိုက်ရတဲ့ ချေမလေးရဲ့ အသားကို ကျမမစားရက်တော့ပါဘူး။
အတိတ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားနေတုန်း ဆင်ဦးစီးနိုးလားပြီး ကျမကြားတဲ့အသံကို သူလည်းသတိထားမိသွားပြီး သေနတ်တလက်နဲ့ အသံကြားတဲ့ဘက်ထွက်သွားလိုက်တာ ကျမတားချိန်တောင်မရလိုက်ပါဘူး။ သိပ်မကြာလိုက်ပါဘူးဆင်ဦးစီးပြန်ရောက်လာပြီး မီးခြစ်တောင်းသွားတယ်။ ဘာအရေးကြီးနေမှန်းသိချင်လို့မေးပေမဲ့ စကားပြန်မရခဲ့ဘူး။ နာရီဝက်လောက်ကြာမှပြန်ရောက်လာပြီး အကျိုးအကြောင်းပြောပြတယ်။ ဆေးမှုးတယောက် တောလည်ထွက်ရင်း ဖွတ်နဲ့ပက်ပင်းတိုးမိပြီး၊ အနီးကပ်မို့ သေနတ်နဲ့ပစ်လို့မရဘဲ သစ်ခေါင်းထဲဝင်ပြေးတဲ့ဖွတ်မြီးကို အားကုန်ဆွဲပြီး အော်နေခြင်းဖြစ်သတဲ့။ တနာရီလောက် ကြာအောင် ဖွတ်နဲ့လွန်ဆွဲနေတဲ့ဆေးမှုး၊ (ဆင်ဦးစီးနိုးလာလို့သာ… နို့မဟုတ်လျှင် ဘယ်အချိန်ထိအောင် ဇွဲနှင့်အော်နေမည်မသိ) ဆင်ဦးစီးကို သစ်ရွက်ခြောက်တွေ သစ်ခေါင်းထဲထည့်ပြီိး မီးရှို့ခိုင်းလိုက်မှ ဖွတ်မီးခိုးမွှန်ပြီး ဆေးမှုးလက်ထဲ ပါလာတော့တယ်။
အဲ့ဒီညက ကျမတို့ထမင်းဝိုင်းလေးက စိုစိုပြည်ပြည်လေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လွန်ဆွဲပွဲမှာ အနိုင်ရအောင်ကူညီခဲ့တဲ့ ဆင်ဦးစီးအတွက် ဖွတ်သားဟင်းတခွက်ကို ဆေးမှုးကလာပို့ ပေးလို့ပါ။ မှိုကြော်နဲ့ဖွတ်သားဟင်း အရသာရှိရှိလေးကို လင်မယားနှစ်ယောက် မျက်နှာချင်းဆိုင်စားကြတော့မယ်ပြင်ကာမှ ဆင်ဦးစီးက သူဗိုက်မဆာသေးလို့ စားနှင့်ပါတဲ့။ အင်းလေ.. သူတို့အစီအစဉ် (အဲ့ဒီနေရာမှာ အရက်မသောက်ရ အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့ နှစ်နာရီ လောက်သွားရတဲ့ထိုင်းရွာက အရက်ဝယ်ပြီး စုသောက်ကြခြင်း) ရှိလို့နေမှာပါအထင်နှင့် တယောက်တည်း မှိုဟင်းများများနှင့်စားလိုက်ရတယ်။ ထမင်းစာပြီး ထမင်းဝိုင်းတခုချန်ကာ ကျန်တာတွေရှင်းပြီး အဆင်သင့်ဆွဲထားတဲ့ စစ်ပုခက်ထဲဝင်ပြီးနှပ်နေလိုက်တယ်။ သူတို့ဝိုင်းစုကြပြီဆို ကိုယ်ကဒီလိုပဲ တယောက်တည်းနှပ်နေကြလေ။ ဒါပေမဲ့ဆင်ဦးစီးက ဘယ်မှမသွားဘဲကျမနဲ့လှမ်းစကားပြောနေခဲ့ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာ ထမင်းဝင်စားတော့တယ်။ ကျမက အစီအစဉ်မဖြစ်ဘူးလားမေးတော့ အစကတည်းကမရှိပါဘူးတဲ့။ ဗိုက်မဆာလို့ စောင့်နေတာတဲ့။ ကျမအနည်းငယ်တော့အဲ့သြခဲ့ပါတယ်။ အသားဟင်းကြိုက်တဲ့ဆင်ဦးစီးက အသားဟင်းပါတဲ့နေ့မှ ဗိုက်အဆာနောက်ကျလို့လေ။
အိမ်ထောင်သက် ငါးနှစ်ပြည့်ပြီး သမီးနှစ်ယောက်ရပြီးမှ သူ့ရဲ့အချစ်ကိုကျမသိခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ တနေ့သူ့မိတ်ဆွေတွေနှင့်စကားပြောရင်း မှိုတောင့်တဲ့အကြောင်းပါလာပြီး ဆင်ဦးစီးဗိုက်အဆာနောက်ကျခဲ့တာမဟုတ်ဘဲ မှိုဟင်းတောင့်မှာစိုးသောကြောင့် ကျမစားပြီး တနာရီကြာမှ စားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တဲ့။ အကယ်၍ နှစ်ယောက်အတူတူစားပြီး တခုခုဖြစ်နေခဲ့လျှင် တယောက်နှင့်တယောက်မကူညီနိုင်ဘဲဒုက္ခရောက်မည်စိုးသောကြောင့် သူဆာပေမဲ့ စောင့်နေခြင်းဖြစ်သည်တဲ့။ ဆင်ဦးစီးရဲ့ ကျမအပေါ်ချစ်ခြင်းဟာ ဘယ်လောက်အထိ စိတ်ချလုံခြုံမှုရှိလိုက်သလဲဆိုတာ
ချွန်း(၆. ၉. ၂၀၀၈)
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 5:55 AM0comments
အခုတလောလူက စဉ်းစားတာများပြီး ရောဂါရချင်သလိုဖြစ်လာနေတယ်။ မိုကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ တရားထဲမှာတော့ လူတွေရောဂါများပြီး သက်တမ်းတိုတာ ဣဿာ၊ မစ္ဆရိယကြောင့်တဲ့။ ဣဿာ၊ မစ္ဆရိယက ချစ်ခြင်း၊ မုန်းခြင့်းကလာတာတဲ့။ ချစ်ခြင်း၊ မုန်းခြင်းက ဝိတက်ကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့။ ဝိတက်ဆိုတာက စဉ်းစားတွေးတောတာကိုပြောတာပါ။ ဒါဆို ရောဂါရလာခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းက စဉ်းစားတာ၊ အတွေးများတာကြောင့်ဆိုပြီး ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်နေပါတယ်ဆိုမှ တွေးစရာတွေက ရောက်ရောက်လာတယ်။
လူတွေများကိုယ့်အတွက်ဘဲကိုယ်သိကြတယ်။ စီးပွားရေးသမားတွေများ လူစုစု ဖြစ်ပြီဆို ဘယ်လိုစီးပွားရှာရမလဲဆိုတာဘဲ စဉ်းစားနေကြတာ။ ကိုယ်ဖာသာစီးပွားရေး ရိုးရိုးသားသားလုပ်တာကို မပြောလိုပါဘူး။ ဒုက္ခသည်တွေကို အကြောင်းပြပြီး စီးပွားရှာကြတာ တော်တော်ဆိုးဝါးတဲ့လုပ်ရပ်ပါ။
ကျမတို့ငယ်ငယ်က မျောက်ပွဲတွေကြည့်ခဲ့ရဘူးပါတယ်။ လူကြီးကသီချင်းဆိုပြီး မျောက်ကလေးကိုကခိုင်းတာပါ။ မျောက်ကလေးက သီချင်းအလိုက်နဲ့ကပြတာကို လူတွေက သဘောကျပြီး ပိုက်ဆံတွေထည့်ကြ၊ စားစရာတွေပေးကြနဲ့။ ကျမကိုယ်တိုင် ခလေးဘဝက သဘောကျပြီး ကိုယ်ရတဲ့မုန့်ဘိုးလေးတွေကို မျောက်ကလေးကို ပေးခဲ့ဘူးပါတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက လူကြီိးတယောက်ပြောတာ ကျမမှတ်မိသေး တယ်။ ”လူအတွေ“တဲ့။ ”နင်တို့ပေးတာကို မျောက်စားရမယ်ထင်သလား“ တဲ့။ အဲဒီအချိန်က တည်းက မျောက်ပွဲဆိုရင် မကြည့်ချင်တော့ဘူး။ မျောက်ကလေးကိုသနားလို့။
ယနေ့အချိန်တွေမှာတော့ တိုးတက်တဲ့ခေတ်ရောက်လာလို့လားမသိ မျောက်ပွဲတွေ မတွေ့ရတော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ မျောက်ပြဆန်တောင်းဆိုတဲ့ အစဉ်လာကြီးကိုတော့ လူတွေကျင့်သုံးနေဆဲပါဘဲ။ ဒုက္ခသည်တွေကို အကြောင်းပြပြီး လုပ်စားလာကြသူတွေက များလာတယ်။ ကိုယ်ကိုတိုင်လည်းမျောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါတွေကိုတော့ မပြောချင်တော့ ပါဘူး။ အခုပြောချင်တာတခုက ”လူအ“ဖြစ်ခဲ့ရတာကိုပါ။
၈လေးလုံးအနှစ်နှစ်ဆယ် နှစ်ပါတ်လည်အခန်းအနားမှပါ။ ၈လေးလုံးအမှတ်တံဆိပ် တွေနဲ့အင်္ကျီတွေကို နာဂစ်မှုန်တိုင်းဒဏ်ခံခဲ့ရသူတွေအတွက် ရံပုန်ငွေအဖြစ်ရောင်းကြတယ်။ ကိုယ်ကတော့ နာဂစ်အတွက်လည်းလျှူရ၊ အမှတ်တရ အင်္ကျီလည်းရတယ်ဆိုပြီး ဝမ်းသာအားရလျှူခဲ့ပါတယ်။ နာဂစ်ဒုက္ခသည် ပြည်သူတွေကို ရည်မှန်းလို့ပေါ့။ ဒုက္ခသည်တွေကို လျှူဒါန်းရတဲ့ပီတိက တခြားအလျှူတွေထက်ပိုတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ စိန်ရောင်၊ ရွှေရောင်တလက်လက်တောက်ပနေတဲ့ အလျှူပွဲထက်၊ ဆာလောင်နေတဲ့ လူတယောက်ကို ထမင်းတနပ်ကြွေးရတာက ပိုပြီးအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တယ် လို့ခံယူထားသူပါ။
ဒါပေမဲ့ ဒီိအလျှူက ဒုက္ခသည်တွေဆီကို မရောက်ဘူးတဲ့။ အကြောင်းပြချက် တွေကတော့ အမျိုးမျိုးပါဘဲ။ အဓိကကတော့ စီးပွားရေးသမားက လုပ်စားသွားတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ကတော့ နာဂစ်ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ရည်မှန်းပြီးလျှူထားတာဆိုတော့ ကိုယ့်အလျှူက စေတနာသုံးတန်ပြတ်သားပြီးသားပါ။ ကိုယ့်အလျှူငွေ ဒုက္ခသည်တွေလက်ထဲ ရောက်တာ မရောက်တာကတော့ တာဝန်ယူထားတဲ့သူတွေနဲ့သာ ဆိုင်ပါတယ်။ စိတ်မကောင်းတာ တခုကတော့ ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ပါ။ သူတို့မှာဘယ်လိုဝဋ်ကြွေးတွေများ ပါလာကြ သလဲမသိပါဘူး။ ”ပေးကားပေး၏ မရ“ ဆိုတာမျိုးနဲ့ကြုံနေကြရတာပါ။ ကျမတို့လို သေးသေးမွှားမွှားအလျှူကအစ၊ နိုင်ငံတကာကကြီးကြီးမားမားအလျှုအထိ သူတို့လက်ထဲ ၁၀% လောက်မှ ရောက်ပါရဲ့လားလို့ စဉ်းစားရင်း ရောဂါတွေတိုးလာပါတယ်။
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 5:53 AM0comments